“မဝေရေ ကျမ ကွမ်းယာသွားဝယ်ချင်တယ် အဖေါ်မရှိလို့ လိုက်ခဲ့ပေးပါလား”
“မအားသေးပါဘူးအေ၊ ဒီမယ် အလုပ်ပိတ်တုန်း ကလေးအ၀တ်တွေ စုလျှော်နေရတယ်”
“လုက်ခဲ့ပါ အစ်မရဲ့ အစ်မပါရင် ဟိုဘက်ကကောင်တွေ နောက်ရဲမှာ မဟုတ်ဘူး”
“မဟုတ်ဘူး ကျမတို့မြန်မာပြည်သားတွေပဲပေါ့။ အဲဒီရှေ့ကဖြတ်သွားရင် အမြဲတမ်းနောက်ခံရတယ် ဟိုမိန်းမတွေပါရင်တော့ တစ်မျိုးပေ့ါ ခုသူတို့မရှိကြဘူး အပြင်ထွက်သွားကြတယ်လေ။”
“အေးပါ ဒါဆို ဒါလေးပြီးအောင်လျှော်လိုက်အုံးမယ်၊ ခဏစောင့် မစောင့်နိုင်ရင်တော့ ညည်းသဘောဘဲ။”
“အာ-စောင့်မှာပေါ့ အ၀တ်တွေကို ကျမကူလှမ်းပေးမယ်။”
“ရပါတယ်အေ အသာနေစမ်းပါ၊ သွား သီချင်းခွေကြည့်ရင်း စောင့်နေ။”
ကွမ်းယာကို နှစ်သက်ခုံမင်စွာ စားလေ့ရှိသော မိုးအကြောင်းကို ကျမကောင်းကောင်းသိသည်။ ကွမ်းယာသည်မအေးကို ကျမတွေ့ချင်သဖြင့် ကွမ်းယာသွားဝယ်ရင်ခေါ်ပါဟု ပြောထားဖူးသည်။ မိုးက ကျမကို စကားနာထိုးပုံမပေါက်တော့ ကျမပြောထားသည်များကို မေ့နေဟန်တူသည်။ လုပ်လက်စ အလုပ်များကို လက်စသတ်ပြီး မိုးနှင့်အတူ ထွက်လာခဲ့သည်။
မိုးပြောသောကောင်လေးများ၏ တိုက်တန်းလျားရှေ့အရောက် “တွေလား မဝေ အဲဒီကောင်တွေကြည့်တဲ့ပုံကို၊ အစ်မသာမပါရင်တော့ သူတို့ပါးစပ်ပုတ်နဲ့ ပေါက်ကရနောက်ပါလိမ့်မယ်။”
“အေးပါ မိုးရယ် ခပ်တည်တည်သာနေလိုက်ပါ သွားကြည့်မနေပါနဲ့။”
ကျမတို့ နှစ်ယောက်လျှောက်လာရင်း လမ်းချိုးကွေ့လေးတွေ လွန်လာတော့ စပါးခင်းများကို တွေ့ရသည်။
“ဟိုမှာကြည့်စမ်းပါ မိုးရယ်။ ဘယ်လောက်တောင် ကျက်သရေရှိလဲ” ဟုပြောရင်း ၀င်းဝါနေသော စပါးခင်းကြီးကို လက်ညိုးထိုးပြဖြစ်သည်။
“ဟုတ်တယ်နော် စပါးတွေမှည့်ကုန်ပြီ လှလိုက်တာအစ်မရေ ကောက်နံ.တွေလည်း သင်းနေတာပဲနော်။”
“အေးဟယ် ရင်ထဲမှာ တမျိုးကြီးပဲ”
“ကျမ ဒီဘက်ကို မရောက်ဖြစ်တာနဲနဲကြာပြီ ကွမ်းယာကိုသူများနဲ့ပဲမှာနေတာ စပါးတွေ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ၀င်းဝါနေလိုက်တာ” ဟု မိုးက တုန့်ပြန်သည်။
“ဆောင်းအငွေ့အသက်များ ရောပြွန်းနေသော နေရောင်ခြည်က ၀န်းကျင်ကိုညင်သာစွာ လွှမ်းခြုံလို့ ထားသည်။ ကြည်စင်ပြာလဲ့နေသော မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းကြီးအောက်ရှိ ရွှေဝါရောင်စပါးနှံများက ငိုက်မြည်းလို့နေကြသည်။ ထိုရှု့ခင်းက လှပကြည့်နှုးဖွယ်ရာ ပန်းချီကားတစ်ချပ်နှယ် တင့်တယ်လိုနေသည်။ ယခုလို ဆောင်းရာသီရောက်တိုင်း ငယ်ငယ်က အမေနှင့်အတူ လယ်ထဲတွင် စပါးရိတ်သိမ်းသူများကို နေ့လည်စာထမင်းသွားပို့ပေးရင်း လယ်ကန်သင်းခုံတွင် ထမင်းများမြိန်ရည်ရှက်ရည်စားရသည်များကို သတိရလိုက်မိသည်။ တောဓလေ့ တောသဘာဝတွေနဲ့ ဝေးကွာခဲ့တာနှစ်တွေ အတော်ကြာညောင်းခဲ့ပြီပဲ လွမ်းမောဘွယ်ရာ အတိတ်အရပ်တွေက ရင်ကိုအောင့်သက် စူးရှသွားစေသည်။
“အစ်မ ဘာတွေတွေးနေတာလဲ ငြိမ်လှချည်လား ရောက်နေပြီ”
“မိုးရယ် စပါးခင်းတွေကိုတွေ့ရတော့ အမေနဲ့ရွာကို သတိရသွားလို့ပါ”
တွေးရင်းငေးရင်းလျှောက်လာရာ ကွမ်းယာသည် မအေးအိမ်ရှေ့ကို ရောက်လို့ရောက်မှန်းပင် မသိတော့။ သွပ်ပြားအဟောင်းများ မိုးကာထားပြီ သစ်သားဘကာပြားများခင်းကျင်းထားတဲ့ ခြေတံရှည် အိမ်လေးတစ်လုံးရှေ့အရောက်တွင် မိုးသည် လူရိပ်လူခြေကို စောင့်ငဲ့ကြည့်နေသည်။
“နင့်မိတ်ဆွေရှိရဲ့လား အသံပေးလိုက်ပါအုန်း” အသာနေပါအုန်းဟူသောအထာဖြင့် မိုးက ကျမလက်ကိုဆွဲညှစ်သည်။
“အော် မိုးတို့ပါလား လာလေရှိတယ်၊ ဒီဘက်ကိုတောင်မလာတာကြာပြီနော်။” အပြန်အလှန်ပြောဆိုရင်း ကျမတို့နှစ်ယောက်အိမ်ပေါ်သို့တက်လိုက်သည်။ မအေး၏မျက်နှာကို အကဲခတ်ရင်း တစုံတရာကို ကျမရှာဖွေနေမိသည်။ သာမန်လက်လုပ်လက်စားဖြစ်သူ မအေး၏ စိတ်ဓါတ်ခွန်အား (သို့မဟုတ်) သူမအား မကြာခင်အချိန်က ပစ်ခွါသွားသော ခင်ပွန်းအပေါ်သဘောထားနှင့် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေသော ဘ၀အပေါ်ခံယူချက်များကို စူးစမ်းလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
မအေးက ကျမအား အနည်းငယ်စူးစမ်းဟန်ဖြင့် ပြန်ကြည့်နေသည်။
“အစ်မအေးရေ ဒါကျမရဲ့ အစ်မလိုရင်းနှီးတဲ့ မဝေတဲ့”
“သြော်ဟုတ်လား မိုးကိုတော့ ကောင်းကောင်းရင်းနှီးနေပါပြီ အစ်မကိုမြင်တော့ မြင်ဖူးပါတယ် အခုမှ လူချင်းသိရတာပေါ့။”
“ဟုတ်ကဲ့မအေး ကျမကိုလည်း မိုးကိုခင်သလို ခင်လိုရပါတယ် ကျမက ကွမ်းတော့စားတတ်ပေမယ့် မိုးလောက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့”
မအေးဘေးတွင် ထမင်းထိုင်စားနေသော ကလေးတယောက်ကို တွေ့ရသည်။ “ဟယ်ကလေးက ကျောင်းမသွားဘူးလား ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲ”
“နှစ်နှစ်ကျော်ပြီလေ” ဟု မအေးက တုန့်ပြန်သည်။
“ကလးက ချစ်စရာလေးမဝေ ယောက်ျားလေးလေ” ဟုပြောရင်း မိုးက ကလေးအနားကို ကပ်သွားသည်။
“ဟုတ်သားပဲ သားကချစ်စရာလေးပဲ ခုဘာဟင်းနဲ့ စားနေလဲ” ကလေးက ကျမအမေးအားမဖြေပဲ ခပ်တည်တည်နှင့်ကြည့်နေသည်။ ကလေးငယ်၏ခေါင်းကို ကျမညင်သာစွာပွတ်သပ်ပေးမိသည်။ အပြစ်ကင်းစင်ပြီး အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးတွေဘ၀က တာဝန်မဲ့လွန်းလှတဲ့ ဖခင်တယောက်ကြောင့် အနာဂတ်လမ်းတွေကို ခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်ကြရအုန်းမှာပေါ့ဟုတွေးမိသဖြင့် ရင်ထဲတွင် ထိုင်းမှိုင်း လေးလံသွားသည်။
“၃ ယောက်ရှိတယ်။ အကြီးတွေက ကျောင်းသွားတက်နေကြတယ်။ ဒီအနားက ကျောင်းမှာပဲလေ” ဟူသော သူမ၏ရှည်ရှည်ဝေးဝေးပြန်ဖြေသံကြားလိုက်ရတော့ ကျမအားရှိသွားသည်။ ကျမက မိုးအား လက်ကုတ်ပြီး သူမခင်ပွန်းအကြောင်းမေးရန် တိုးတိုးကပ်ပြောဖြစ်သည်။ မိုးသည် မအေးထံတွင် ကွမ်းယာ လာဝယ်စားရင်း အလပသလ္လာပမှ ၄င်းတို့၏မိသားစုရေးအထိ ပြောနေကျဖြစ်သဖြင့် သူတို့နှစ်ဦးကြားတွင် ယုံကြည်မှုက အတန်အသင့်ရှိနေပြီဟု သိထားသဖြင့် မေးခိုင်းရခြင်းဖြစ်သည်။
“အစ်မ ဘာသတင်းရသေးလဲ ဖုန်းဆက်သေးလား”
“မဆက်ပါဘူး မိုးရယ် သူပျောက်သွားတာ ၃ လလောက်ရှိပြီ မိန်းမယူသွားတယ်လို.လည်း ပြောကြတာပဲ။ အစ်မတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မမျှော်တော့ဘူး။ ထွက်သွားကာစကတော့ မျှော်မိတယ်။ ခုတော့သူလည်း သူ့လမ်းကိုလျှောက်သွားသလို အစ်မလည်း အစ်မဘ၀ကိုကျိုးစားရုန်းကန်ရမယ်။ ကိုယ့်ကိုမကြင်လို့ ပစ်သွားတဲ့လူကို မျှော်နေလည်းအလကားပေါ့မဟုတ်ဘူးလား။ သူသွားကာစက အိမ်ရှေ့အိမ်ကို ဖုန်းဆက်သေးတယ်။ သူဘန်ကောက်မှာ အလုပ်သွားလုပ်တာတဲ့ ငွေပို့ပေးမယ်လို့ ပြောတယ်။ အဲဒီတစ်ခါဆက်ပြီး နောက်မဆက်တော့ဘူး ဘာသတင်းမှလည်း မရတော့ဘူး။ ကြည့်လေ့ မိုး သူသွားတာကြာပြီ ကလေးတွေအတွက် ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှတောင်ပို့မပေးဘူး”ဟု အမျိုးသမီး အချင်းချင်းတွေမို့ထင်ပါရဲ့ မအေးက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြသည်။
ကျမလည်း တိတ်တဆိတ်နားထောင်နေရာမှ “မအေးကလေးငယ်နဲ့ဆိုတော့ အပြင်အလုပ်လည်း ထွက်လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်။”
“အင်းပေါ့လေ အိမ်မှာနေရင်းလုပ်လို့ရတဲ့ ကွမ်းယာပဲရောင်းရတာပေါ့ တခြားဘာမှလည်း လုပ်လို့မရပါဘူး”
“ဟုတ်တယ်နော် မိခင်တွေက ဒီလိုပဲ ကလေးငယ်ရှိရင် အလုပ်လုပ်ဖို့စဉ်းစားရတာ ဘယ်တော့မှ အဆင်မပြေဘူး”
စကားပြတ်သွားရာ မိုးကိုကြည့်လိုက်တော့ ကလေးနှင့် အပေးယူတည့်နေသဖြင့် နောက်ထပ်စကား ဆက်ပြောမည့်ပုံမပေါ်ပေ။ အပျိုဖြစ်သော မိုးကကျမစိတ်ဝင်စားသော မအေး၏အိမ်ထောင်ရေးကို စိတ်ဝင်စားပုံမပြ။ သို့ပေမယ့် ကျမက ကလးသုံးယောက်နှင့် ချန်ထားခံခဲ့ရသော မိန်းမတစ်ယောက်၏ ဖွင့်ဟလွင့်စင်ကျလာမည့် စကားများကို နားလည်စာနာစွာ နားထောင်ပေးချင်နေမိသည်။
ထိုစဉ် အိမ်ပေါ်သို့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်တက်လာသည်။ မီးဖိုနားရှိ အိုးခွက်များကို ဆတ်ခနဲ လှန်လှောရင်း “မအေး ညည်းကလည်း ခရမ်းသီးနှပ်လေးဘာလေး ပိုလုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူး ငါကမနေ့ကလို ညည်းဆီက ဟင်းရမယ်ထင်လို့ အိမ်မှာ ဘာဟင်းမှတောင် ချက်မထားဖြစ်ဘူး”။
“ဟုတ်လား ကျမလည်း အရင်းအနှီးနည်းတာနဲ့ ပိုမချက်နိုင်ဘူး”။
သူတို့နှစ်ယောက် အပြန်အလှန်ပြောနေကြသော စကားများကိုနားထောင်နေရင်း အနီးဝင်းကျင်ကို အကဲခတ်ကြည့်လိုက်တော့ ဟင်းထုတ်လေးများကို ပလပ်စတစ်အိတ်ထဲတွင် ထည့်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
“သြော်အခုမှ မအေးလုပ်ထားတဲ့ဟင်းထုတ်တွေကို သတိထားမိတယ် သိရင်လာဝယ်စားလို့ရတာပေါ့နော် မိုး”။
“ဟယ်ဟုတ်သားပဲ မအေးက မိုးကိုတောင်မပြောပြဘူး” ဟု မိုးက စိတ်ကောက်သလို အမှုအရာနှင့်စသည်။
“မိုးရေ အစ်မက ကျန်းမာရေးကလည်း သိပ်မကောင်းလို့အများကြီး မချက်နိုင်လို့ပါ အခုချက်တယ်ဆိုတာက ရှေ့ဘက်ကစက်ရုံက လူသစ်လေးယောက်စာအတွက်ပဲချက်ပေးတာ သူတို့က ဒီကိုရောက်စဆိုတော့ အသိမိတ်ဆွေလည်းမရှိ၊ ငွေလည်းမရှိဆိုတော့ အစ်မကအားနာလို့ ချက်လက်စနဲ့ ချက်ပေးနေတာ”
“ဟယ်မအေးက ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့ ကူညီပေးနေတာ အလကားလုပ်ပေးတာမဟုတ်ပေမယ့် တော်ရုံစေတနာနဲ့ လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး” ဟုပြောမိသညိ။
ကျမစကားသံအဆုံးတွင် မအေးက ပြုံးလိုက်ပြီး “ကျန်းမာရေး မကောင်းပေမယ့် စေတနာလည်းပါတယ်။ ၀င်ငွေရအောင်လည်း လုပ်ရင်းပေါ့။ ဟိုတစ်နေ့က မုန့်တီလေးချက်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကမကောင်းတော့ အမောမခံနိုင်ဘူး မုန့်တီချက်ပြီး ပင်ပန်းတော့ မှုးလဲသွားတာ အိမ်ရှေ့စက်ရုံက ကောင်မလေးတွေတွေ့ပြီး ဆရာခေါ်ပေးလို့ ဘတ် ၁၂၀ တောင်ထွက်သွားသေးတယ်။ မုန့်တီချက်လို့ မြတ်တာက ၅၀ လောက် နေမကောင်းလို့ ဆရာခေါ်တာနဲ့တင် အရင်းထဲကပါသွားသေးတယ်”။
မအေးစကားကို နားထောင်ရင်း ကျမ သက်ပြင်းမော တစ်ခုကို မသိမသာ ချလိုက်မိသည်။
“ဟုတ်တယ်နော် ကျန်းမာရေးမကောင်းရင် စိတ်ညစ်ရတယ်။ ကျန်းမာရေးကိုပဲဂရုစိုက်ပါ။ လုပ်နိုင်သလောက်ပဲလုပ်ပေါ့နော် လိုအပ်တဲ့အကူအညီရှိရင်လည်းပြောပါ အားမနာပါနဲ့၊ ငါတို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံသား အချင်းချင်းတွေပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲ ညီအစ်မတွေလို ဆက်ဆံကြတာပေါ့နော်။ ကျမနေတာက ဟိုနားမှာပဲ သိပ်မဝေးပါဘူး” ဟု ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ဖြင့် ပြောမိသည်။
“ရပါတယ် ညီမရယ် အစ်မက သူများဆီက အကူအညီတောင်းရမှာကို အားနာတယ် ကိုယ့်မှာက ခြေလက်တွေ အကောင်းကြီးရှိသေးတာပဲ စိတ်မပူပါဘူး။ ဟိုတစ်ယောက်ထွက်သွားကတည်းက ဈေးဝယ်၊ ရေခပ်၊ ဟင်းချက်၊ သောက်ရေကို လိုက်ပို့ကိစ္စတွေကိုလည်း စီစဉ်ပေးရတယ်။ အခုမှ ဒီကလေးကို တွေ့ရတာ အခုနကပဲလိုက်ပတ်ကစားပြီးပြန်လာတာလေ။ ကျမမှာ စိတ်ပူရသေးတယ် ဟိုနားက ရေကန်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်က သားလေးတစ်ယောက်ရေနစ်ဆုံးသွားတယ်။ အဲဒါကြောင့် ရေကန်နားကအိမ်က ကောင်လေးကိုတော့ ကလေးကိုရေကန်နားမသွားအောင် ၀ိုင်းကြည့်ပေးဖို့ အကူအညီတောင်းရတယ်”။
“အော်ဒါဆို မအေးက ကလေးအားလုံးလေးယောက်ပေါ့နော်”။
“အဲဒီ ကလေးကရော ဆုံးသွားတုန်းက ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲ”။
မအေးက ကျမအမေးများကို ပြန်ဖြေရင်း အိမ်ရှေ့ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင်ရှိသော စိမ်းညှိနေသည့် ကိုက္ကိုပင်ကြီးကို ရီဝေစွာငေးကြည့်နေသည်။ မအေးရင်ထဲကသောကတွေ အဲဒီကုက္ကုပင်ကြီးရှိ အခက်အရွက်တွေမှာ ကူးလူးနာနေနိုင်ပါစေလို့ တိတ်တဆိတ် ဆုတောင်းလိုက်မိသည်။
“အဲဒီတုန်းကလေ ကျမမှာဒုက္ခရောက်လိုက်တာ ကလေးလည်းဆုံး ယောက်ျားကလည်း ရှုးသွားသေးတယ်။ ဗမာပြည်မှာပြန်ပြီး ဆေးကုလို့ပြန်ကောင်းလာတာ။ မဲဆောက်ကို ပြန်လာတာ ခြောက်လလောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ကျမကသာ သူနေမကောင်းဖြစ်တော့ ပြုစုလိုက်ရတာ အရှုးကို စိတ်ရှည်သီးခံပြီး လင်တော်နေခဲ့တယ်။ ဒါငါ့ဘ၀အကြောင်းကံပဲဆိုပြီး တစ်ယောက်တည်း ရုန်းကန်လိုက်ရတာ သူကတော့…..”။
ထိုသို့ရှည်လျှားစွာ ပွင့်အံထွက်ကျလာတော့မှ ကျမကိုရင်ဖွင့်မိတဲ့အတွက် မအေးရင်ထဲက သောကတွေ အတန်အသင့်သက်သာကောင်းပါရဲ့ဟု ဖြေတွေးမိသည်။
ကျမတို့ ပွင့်လင်းစွာ အပြန်အလှန်စကားပြောနေကြစဉ် လူတစ်ယောက်က “အစ်မအေးရေ ရေက ၂ ပုံးကျန်သေးတယ် ဘယ်လုပ်လုပ်မလဲ”
“အေးအေးယူလာ အိမ်ပေါ်မှာပဲ လာတင်ပေးကွယ်”
“အဲဒါသာကြည့်တော့ သူတို့ကိုရေရောင်းပေးဖို့ ခေါ်ထားတာမကုန်ရင်လည်း အိမ်မှာပဲထားပြီး သူများတွေက ရေလိုတယ်ဆိုရင် ကျမကိုယ်တိုင်ထမ်းပို့ပေးရတယ်။”
အသားညှိစိမ့်စိမ့်နှင့် အသက် ၃၀ ကျော်လောက်သာရှိမည့် မအေးအားကြည့်ရင်း သူမအား ခွန်းအားတွေဖြစ်စေမည့် စကားလုံးများကို သွန်ချနိုင်ဖို့ ကြိုစားလိုက်မိသည်။
“အေးပေါ့နော် အားလုံးက မအေးတာဝန်တွေဖြစ်နေပြီ။ ကလေးတွေကို ကြည့်ရှုရတာနဲ့ စားဝတ်နေရေးအပြင် ပညာတတ်အောင်ပါ သင်ပေးရတယ်ဆိုတော့ ပင်ပန်းမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဓါတ်က အဓိကပါပဲ။ ငါလုပ်နိုင်တယ် ငါ့ဖာသာ ရပ်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့အသိက မအေးကို အားအင်တွေအများကြီးဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သားသမီးတွေကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်း ဘ၀ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်နေကြတဲ့ မိခင်ကောင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်”။
“ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ် ဒါပေမယ့်လေ သူထွက်သွားကာစကဆို စဉ်းစားလွန်းလို့ ညညအိပ်မပျော်ဘူး။ တောင်တွေးမြောက်တွေးပေါ့။ ငါ့ကိုဘာကြောင့် ဒီလိုလုပ်သွားလဲဆိုပြီး ၀မ်းနည်းတာရော ဒေါသထွက်တာရော အစုံခံစားရတယ်။ နှလုံးရောဂါတောင်ရနေပြီထင်တယ်။ အမောလည်း မခံနိုင်တော့ဘူး။ နောက်မှ ကလေးတွေကို ငါလုပ်ကျွေးရအုံးမယ် သူမရှိလည်း ဘာဖြစ်လဲ ငါ့ဟာငါ လုပ်စားရမှာပဲ အလုပ်လုပ်ရင်းငတ်သေတဲ့လူ မရှိပါဘူးဆိုပြီး စိတ်ကိုပြန်တင်းထားရတယ်။ အဲဒီအပူတွေပြေဖို့အတွက် ခုဆိုညဖက်မှာ တရားထိုင်ပုတီးစိပ်ပုံမှန်လုပ်တယ်။ စိတ်ထဲမှာ ခုမှပဲရှင်းသွားတော့တယ်။
“ဒီလိုဆို မအေးက ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် နိုင်တာပဲ၊ ဟိုတလောက ကျမဆီရောက်လာတဲ့ မိန်းကတစ်ယောက်ဆို သူ့ယောက်ျား မယားငယ်ယူသွားလို. ပြန်လာအောင် ဗေဒင်တွေမေး ယတြာချေလုပ်ရင်းနဲ့ ဘတ်နှစ်သောင်းလောက် အကြွေးတင်သွားတယ်ပြောတယ်။ ကျမလည်း “လိုက်မနေနဲ့အစ်မ ငွေကုန်လူပန်းဖြစ်မယ်။ သူစိတ်မကုန်ရင် ပြန်လာလိမ့်မယ် လွှတ်ထားလိုက်လို့” ပြောလိုက်သေးတယ်။ သူတော့ နေနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့တော့ပြောသွားတာပဲ။ နောက်ထပ်တော့ မတွေ့ဖြစ်သေးဘူး”။
“ဟုတ်လား သူကကျမထက်ဆိုးတာပေါ့နော်။ ကျမဆိုရင် အဲဒီအတွက် ကုန်မယ့်ငွေတွေကို ကလေးတွေရှေ့ရေးအတွက် သုံးပစ်လိုက်မှာ”
ကျမစကားလည်းဆုံးရော မအေးမှအံ့သြတကြီးနှင့် အားမာန်ပါစွာတုန်.ပြန်လိုက်သည်။
“ဟုတ်တယ် ကျမတို့မိန်းမမှာ အလွန်အင်အားကြီးတဲ့မိခင်စိတ်တွေက ဘ၀ကိုကျော်ဖြတ်ဖို့ ခွန်အားတွေ မွေးထုတ်ပေးတတ်တာလည်းသဘာဝပဲ မအေးရေ”။
တချိန်လုံး ငြိမ်ပြီးနားထောင်နေသော ဟင်းလာဝယ်သည့် အမျိုးသမီးက
“အဲဒါပေါ့ အိမ်ထောင်ရှိတဲ့ယောက်ျားကို လက်ခံတဲ့ မိန်းမတွေကြောင့်ပေါ့။ နို့မဟုတ်ရင် ဒီလိုမျိုးတွေ ဘယ်ကြုံရမလဲ”။
“အိုး မဟုတ်တာ အစ်မရယ် မိန်းမတွေမှာပဲ တာဝန်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ ယောက်ျားတွေမှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်။ ကိုယ်တည်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ထောင်ကို ထိမ်းသိမ်းရမှာပေါ့ သားသမီးတွေရဲ့ မျက်နှာကိုလည်းထောက်ရမှာပေါ့။ နောက်တသက်လုံးပေါင်းလာတဲ့ မိန်းမကိုလည်း ငဲ့ညာရမှာပေါ့။ အမှားကျူးလွန်းတာချင်းတူတာတောင် သူတို့ကပိုပြီးမှားတာပေါ့။ တာဝန်မဲ့ပုံက ထွက်သွားရင်လည်း လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပဲ ကလေးတွေက သူတို့နဲ့မဆိုင်သလိုပဲ အဲဒါမဟုတ်ဘူးလား” ကျမ မခံချင်စွာ ရှည်ရှည်ဝေးဝေးရှင်းပြလိုက်သည်။
ဖောက်ပြန်တတ်သည့်စိတ်က မိန်းမရယ် ယောက်ျားရယ်မဟုတ်ပဲ ရှိတတ်သော်လည်း အမျိုးသားများ ပို၍ကျူးလွန်မှုများသောကြောင့် ကျမယေဘုဆန်ဆန်သုံးသပ်၍ ပြောပြလိုက်သည်။
“အဲဒါလည်း ဟုတ်ပါတယ်” ကျမစကားကြောင့် ဈေးဝယ်အမျိုးသမီးက စောစော အပြစ်ပြောသည့်လေသံမျိုး မဟုတ်တော့ဘဲ လေသံပျော့ပျော့ဖြင့် တုန့်ပြန်သည်။ ဒါတောင် ထပ်ဆင့်၍
“ဒါဖြင့် ဆိုရှေ့ကစက်ရုံမှာဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ကောင်လေးမှာမိန်းမရှိတယ်ဆိုတာသိသိကြီးနဲ့ သူ့ဆီလာဖို့ အမြဲခေါ်နေတာရော အဲဒီမိန်းမ မဆင်ခြင်လို့ပေါ့”
“အင်း ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း တခုခုဖြစ်ရင် မိန်းမတွေကိုအရင်အပြစ်မြင်တတ်ကြတယ်။ ယောက်ျားတွေကိုဆို ယောက်ျားပဲဒါသဘာဝပဲဆို ၀န်းရံပေးတတ်ကြတယ်။ အဲဒါတွေက ယောက်ျားတွေကို မိန်းမတွေအပေါ်အနိုင်ကျင့်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် ယောက်ျားတွေကို လူ့လောကမှာ သူတို့လုပ်ချင်ရာ စိတ်ထင်တိုင်းလုပ်ဖို့ ခွင့်ပြုထားသလို ဖြစ်နေတာပေါ့။ ကျမတို့ ယဉ်ကျေးမှုမှာ ရည်းစားစကားဘယ်သူ အရင်စပြောတတ်ကြလည်း ရှင်းရှင်းလေးလေ အမပြောကြည့်”။
“အဲဒါပြောတာပေါ့ မိန်းမရှိရက်နဲ့ အပြင်ထွက် လူပျိူလို့ပြောချစ်ရေးဆို သေချာတာကတော့ မိန်းကလေးတွေအတွက် ကိုယ့်ကိုချစ်ရေးဆိုလာတဲ့ လူဆီမှာ လူပျိုလူအိုခွဲခြားမြင်လို့ရနိုင်တဲ့ ထူးထူးခြားခြား ချိုလေးဘာလေးပါမလာတော့လည်း အခက်သားအစ်မရဲ့”
ကျမစကားလည်းဆုံးရော လေးယောက်သား ၀ါးကနဲပွဲကျသွားကြသည်။ ကျမတို့ရယ်သံကြားတော့ ကလေးက ရုတ်တရက်လန့်သွားဟန်ဖြင့် မအေးရင်ခွင်တွင်းသို့ ပြေးဝင်ထိုင်သည်။
“ညီမပြောတာလည်း ဟုတ်သားပဲနော်” ဟု ထိုအမျိုးသမီးမှ တုန့်ပြန်သည်။
ကျမတို့နှစ်ဦး အမှားကျူးလွန်သူများအကြောင်း အပြန်အလှန်ငြင်းခုန်နေသည်ကို မိုးရော မအေးပါ စ်ိတ်ဝင်တစား နားထောင်နေကြသည်။ မအေးက
“တစ်ခုပြောမယ်နော် ကျမ ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်မပြောချင်ပါဘူး။ ကျမယောက်ျား ကျမကို ကလေးသုံးယောက်နဲ့ ပစ်သွားတယ်။ ကျမကတော့ ခပ်ရှင်းရှင်းပဲ သူတာဝန် မယူချင်လို့ လှည့်မကြည့်တာ ကျမကို မပေါင်းချင်ရင်တောင် သူနဲ့ရခဲ့တဲ့ ကလေးသုံးယောက်ရှိတယ်၊ သူ့မှာ ဒီကလေးတွေကို ကျွေးမွေးရမယ့် အဖေဆိုတဲ့တာဝန်ရှိတယ်။ အဲဒီတာဝန်တွေကိုသူမယူဘူး။ အခုအချိန်ထိဘာမှ ထောက်ပံ့မပေးဘူး။ နောင်လည်း ထောက်ပံ့မယ်လို့မထင်ဘူး။ ကျမ၀မ်းမနည်းသလို မျှော်လည်း မမျှော်နေဘူး၊ တစ်ခုတော့ရှိတယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်က ယောက်ျားမရှိတော့တဲ့ မိန်းမတယောက်ကို မရိုသေချင်ကြဘူး၊ စမ်းသပ်ချင်ကြတယ်”
ပြောရင်စိတ်မကောင်းဟန်ဖြင့် ငြိမ်သက်သွားသည်။ ကျမလည်း မအေးလက်ကို နွေးထွေးစွာ ဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်မိသည်။
“ဟိုတစ်ညကလေ ည ၁၂ နာရီ ထိုးနေပြီ အမျိုးသားတစ်ယောက် ကျမကိုတံခါးလာဖွင့်ခိုင်းတယ် နင်ဘာလုပ်မလို့လဲမေးတော့ ကွမ်းယာဝယ်ချင်လို့တဲ့ ကျမလည်းကွမ်းသီး ကုန်နေတယ်လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ မရဘူးထပ်ပြီးတော့ အိမ်ပြန်ရမှာ အရမ်းဝေးလို့ အစ်မအိမ်မှာ တညလောက် အိပ်ခွင့်ပေးပါလို့ပြောသည်။ ကျမလေ ဒေါသထွက်လိုက်တာ။ ဟေ့ကောင် နင်ပြန်တော့ ပေးလည်းမအိပ်နိုင်ဘူး ကွမ်းယာလည်းရောင်းဖို့မရှိဘူး။ မပြန်ဘူးလား ပြန်မှာလားဆိုပြီး အော်ပစ်လိုက်တယ်။ ဒါတောင်မရဘူး။ တစ်ညပါအစ်မရယ်ဆိုပြီး ထပ်ပြောသေးတယ်။ ဒီမှာ ငါတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်။ ကလေးတွေလည်း အိပ်ကုန်ပြီ နင်မပြန်ရင်နေ နောက်မှ ငါ့အဆိုးမဆိုနဲ့နော်လို့ လည်းပြောရော ဒါဆိုအိမ်ရှေ့လှေခါးမှာပဲ အိပ်မယ်လုပ်နေတယ်။ ကျမလေ သူ့အသံတိတ်သွားပေမယ့် လှည့်ပြန်တဲ့ ခြေသံမကြားမခြင်းမအိပ်ရဲဘူး။ အတော်ကြာမှ ပြန်သွားတယ်။ အဲဒီညကလေ မိုးသာစင်စင်လင်းသွားတယ် ကျမတရေးမှ မအိပ်လိုက်နိုင်ဘူး”
ကျမလည်း နားထောင်နေရင်း ဒေါသထွက်မိသည်။ တချိန်တည်း မီးဖိုဘေးတွင် ဓါးသွားတွေလက်နေသော ဓါးမတစ်ချောင်း ထောင်ထားသည်ကို ကြည့်ရင်း “မအေးရေ နောက်တခါ အဲဒီလိုလူမျိုးလာလို့ ပြောမရရင် ဓါးနဲ့သာ ခုတ်မယ်ဆိုပြီး လုပ်လိုက်တော့ ကိုယ့်ကို စော်ကားမခံနဲ့” ဟု ဒေါသနှင့် အကြံပေးမိသည်။
မခေသော မအေးကလည်း “ကျမလည်း သူမပြန်ပဲ အချိန်အကြာကြီး ဒုက္ခဆက်ပေးနေရင် အဲဒီလို လုပ်မိရင်လုပ်မိမှာ” ဟု ပြန်ပြောသည်။
ကျမ စိတ်ပူသွားပြီး “တံခါးတွေ လုံလုံခြုံခြုံလုပ်ထားပါ မအေးရယ် ပြီးတော့ တစ်ခုခုဖြစ်ရင်တော့ ကျမတို့ကို အသိပေးပါ လုပ်စရာရှိတာတွေ လုပ်သင့်တာတွေ ကျမတို့ဝိုင်းဝန်းလုပ်ရမှာပေါ့။ အစ်မတစ်ယောက်တည်းတော့ ကျိတ်ရင်ဆိုင်မနေပါနဲ့။ မတရားတာတွေ ဖြစ်လာရင် တရားတဲ့နည်းနဲ့ ဖြေရှင်းလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိတယ်”။
“ကျေးဇူးပါပဲ ညီမရယ် အစ်မ အားတကယ်ဖြစ်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်က သူ့ဘာသာရပ်တည်နေတဲ့ မိန်းမတွေဆို သွေးတိုးစမ်းချင်ကြတာ၊ အဲဒါကို ဒေါသထွက်လို့မဆုံးဘူး၊ အတော်ယုတ်မာကောက်ကျစ်ကြတယ်၊ နောက်တစ်ခါ လာရဲ့လာကြည့်ပေါ့။ ကျမတော့ သေသေရှင်ရှင် ချပစ်လိုက်မယ်။ ဘယ်သူစော်ကားတာမှ ငြိမ်ခံနေမှာမဟုတ်ဘူး။ ကျမယောက်ျားနဲ့ ပတ်သက်ရင်လည်း ကျမစိတ်ကပြတ်တယ်။ သူသွားချင်တဲ့လမ်း သူသွားလိုက်ပြီ၊ သူလုပ်ခဲ့တာတွေအားလုံးက သူ့ရဲ့အရိပ်ပဲ သူမသေမချင်း အရိပ်လိုလိုက်နေမှာပဲ သူ့လိပ်ပြာသူသန့်ရင်လုပ်ပေါ့။ ကျမကတော့ ကျမလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေ သန့်ရှင်းသလို ကျမအရိပ်ကလည်း ကျမနောက်ကို သန့်သန့်လေးလိုက်နေမှာပဲ။ ကိုယ့်ကို မကြင်လို့ပစ်ခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက် ပူဆွေးဝမ်းနဲနေရမယ့်အစား ကျမနဲ့ကလေးတွေဘ၀ ရပ်တည်ရေးအတွက် ကြိုးစားရုန်းကန်ရအုံးမယ် ညီမရေ”။
အားတက်သရော ပြောချလိုက်သော မအေးစကားကို နားထောင်ရင်းမှ “မအေးပြောတာ သိပ်တန်ဖိုးရှိတာပဲ အချိန်မရွေးဖေါက်ပြန်နေတတ်တဲ့ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ မိန်းမတွေအတော်တော်များများဟာ မအေးလို ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုတွေရနေဖို့လည်း သိပ်လိုအပ်တယ် သိလား”။
“မအေးရေ မဝေစကားတွေကိုနားထောင်ရင်း သူစည်းရုံးရေးအောက်ဝင်သွားပြီလား အားတွေရော သိပ်ရှိသွားပြီမဟုတ်လား။ အဲဒီမဝေကလေ အမျိုးသမီးတွေကိုထိရင် နည်းနည်းမှ သီးခံတတ်တဲ့လူ မဟုတ်ဘူး သိလား”
“ကောင်းတာပေါ့ မိုးရယ် ညည်း မဝေလို အမျိုးသမီးတွေလည်း လောကမှာ အများကြီးလိုအပ်တယ် မိုးလည်း မဝေဆီက အသိပညာတွေကို လေ့လာထားအုံးနော်”
ကျမတို့နှစ်ယောက် မအေးအားနှုတ်ဆက်ထွက်ခွါလာခဲ့ပြီးနောက် မအေးပြောသည့် အရိပ်ဟူသော စကားတလုံးက ကျမရင်ထဲတွင် စူးတစ်ချောင်းပမာ ငြိတွယ်ပါလာခဲ့သည်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်၏ ပစ်ခွားသွားခြင်းကိုခံခဲ့ရသော မိန်းမတစ်ယောက်၏ အားမာန်ပါသော စကားများကို နားထောင်ရင်း ကျမတို့တတွေ သုံးနေကျစကားလုံး တစ်လုံးဖြစ်သည့် လူဆိုတာ ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်ရေးကြတာ သမိုင်းကောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့စကားကို သတိရမိလိုက်သည်။ ကျမ စဉ်းစားမိလိုက်တာကတော့ မအေးက သမိုင်းဆိုတဲ့စကားနေရာမှ အရိပ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သူကျွမ်းကျင်သလို သုံးစွဲသွားလိုက်တာများလား။
Posted by daw nwe at 6:21 AM 1 comment:
ယခုနှစ် မတ်လ ရှစ်ရက်နေ့ (၃၂) ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများ နေ့ အထိမ်းအမှတ် လှုပ်ရှားမှုများကို သတင်းများမှ ကြားနေရသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ချင်းမိုင်မြိုတွင် အမျိူးသမီးများအဖွဲ့ ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) အပါအဝင် ထိုင်းအမျိုးသမီးအဖွဲ.များ၊နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီင်္းများအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမျိုးပေါင်းစုံ တသီးပုဂ္ဂလ အမျိူးသားအမျိူးသမီးများပူးပေါင်းကာ စုစုပေါင်း (၃၀၀)ကျော် ချီတက်စီတန်း လှည့်လည်ရင်း ( We got the right to move & here we go) “သွားလာခွင့် တွေရပြီလာစို့သွားစို့” ဆိုသည့် အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ၊ ထိုင်းဘာသာစကားတို့ဖြင့် ကြွေးကြော်သံများကိုလည်း တက်ကြွအားရဖွယ်ရာ ကြားလိုက်ရသည်။ အမျိုးသမီးများအား ခွဲခြား ဖိနှိပ်ထားသည့်အခြေအနေများနှင့် သက်ဆိုင်သည့်စာတမ်းများ ၊ ပိုစတာတွေ များကို ကိုင်ဆောင်ထားပြီး ချီတက်ပွဲပြုလုပ်ကြသည်ဟု ကြားသိရသဖြင့် စိတ်ကူးဖြင့် မှန်းဆ မြင်ယောင်ကြည့်ရင်း ပျော်ရွင်အားတက်မိသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အမျိုးသမီးထု ကိုယ်စား အားမာန်ပါသော ကြွေးကြော်သံများကို ထိုညနေရေဒီယိုမှ တဆင့်ကြားရတော့ ကျမရင်ထဲတွင် ကျေနပ်ပီတိဖြစ်မှုနှင့် အတူ စိတ်မကောင်းခြင်းများလည်း တပြိုင်တည်းတွင်ဖြစ်ပေါ်လာမိသည်။
အားရကျေနပ်မှုဖြစ်ရခြင်းမှာ ထိုနေ့ချင်းမိုင်ရှိ အမျိုးသမီးများ၏ လှုပ်ရှားမှုအသံများကို ကြားရ၍ဖြစ်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရခြင်းမှာ ထိုနေ့လည်ခင်းတွင် ကျမတွေ့ဆုံခဲ့ရသော မဲဆောက်မြို့ စက်ရုံတခုမှ အလုပ်သမားအမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေများ မျက်စိထဲတွင် ဖြိုးခနဲဖြတ်ခနဲ ရုပ်ရှင်ပြကွက်များပြသကဲ့သို.ပေါ်လာပြီး သူတို့လေးတွေ၏ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ စကားသံများကိုလည်း ပြန်လည်ကြားယောင်မိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
နေ့လည်ပိုင်းက အပြင်လူဝင်ခွင့်မရသည့် အလုပ်သမားများ နေထိုင်သော အဆောက်အဦးထဲကို မမျှော်လင့်ပဲ လူတဦးအကူအညီနှင့် ကျမဝင်ခွင့်ရလိုက်သည်။ ဂိုဒေါင်ကြီးတလုံးလိုလုံးတီးကြီးဖြစ်နေပြီး ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့နေတဲ့ အဆောက်အဦးကြီးက အလုပ်သမားတွေအတွက်တော့ နတ်ဘုံနတ်နန်းကြီးတခုပါပဲ။ ဇာတ်ရုံကြီးတရုံနဲ့ လည်း တူနေပါရဲ့။ တကယ့်ကို ဇာတ်ရုံနောက်က ဇာတ်သမားတွေ ပြင်ဆင်တဲ့ အခန်းလိုပဲ ကျမတော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမိသည်။ ဇာတ်သမားတွေရှေ့ထွက် အခန်းတွေကိုမှီဖို့အတွက် ဒီတထည်ချွတ် နောက်တထည်ဝတ် အပြန်အလှန် အသစ်ဝတ်လိုက် ဝတ်ထားတဲ့အဟောင်းကို နီးရာ ချွတ်တင်ထားသလို သူတို့နေတဲ့ အဆောက်အဦးကြီးအတွင်းမှာ အဝတ်များ တိုးလို့တွဲလောင်းဖြင့် ရှုပ်ပွနေတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရသည် ကျမတို့တွေ့ချင်တဲ့ အမျိုးသမီးလေးရဲ့ နာမည်ကိုခေါ်ရင်း ဝင်သွားဖြစ်သည်။ သူရေချိုးနေသဖြင့် တော်တော်နဲ့မတွေ့ရပေ။ ကျမတို့ သူ့ကိုစောင့်ရင်း ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နှင့် စက်ရုံအတွင်းပိုင်းကို စူးစမ်းခွင့်ရခဲ့သည်။ ဆန်အိတ်ခွံများ ကပ်ထူစက်ကူပုံးခွံများဖြင့် ကာရံထားသည့် အခန်းလေးတွေထဲမှ အရွယ်စုံအမျိုးသမီးများ အရှိုရှိုထွက်လာကြသည်။ မျက်နှာစိမ်းကျမကို သူတို့ကွက်ကြည့် ကွက်ကြည့်နှင့် စူးစမ်းနေကြသဖြင့် ကျမလည်းသူတို့ကိုပြုံးပြရင်း “ဒီညအိုတီင်္ရှိလားဟင်”ဟု နှုတ်ဆက်ဖြစ်လိုက်သည်။ “ရှိတယ်အစ်မ၊ ခြောက်နာရီဆိုရင်ကျမတို့ပြန်သွားရမှာ အစ်မဘယ်သူ့ကိုလာတွေ့တာလဲ”ဟု ခပ်သွက်သွက် ကောင်မလေးတစ်ယောက်က တုန့်ပြန်ရင်းပြန်မေးသည်။ ကျမအား ဖော်ဖော်ရွေရွမေးလာသော ကောင်မလေးကိုကြည့်တော့ အသက်ဆယ်ခြောက်နှစ်ပင် ပြည့်မည်မထင်။ လာရင်းကိစ္စကို ပြန်ပြောရင်းဖြင့် မျက်စိရှေ့ရှိ အထပ်ခိုးကဲ့သို့ အကာအရံမရှိသည့် အပေါ်ထပ်ကိုမော့ကြည့်ဖြစ်တော့ ယောကျာ်းလေးအဝတ်စားများ ပြီးစလွယ် ပစ်တင်ထားကြတာတွေ့ရသည်။ ကျမကြည့်နေရာကို လိုက်ကြည့်သောကောင်မလေးက “အဲဒါယောကျာ်းလေးတွေနေတာလေအစ်မရဲ့ အဲ့ဒီအောက်မှာက အိမ်ထောင်သည်တွေ ဒီဖက်မှာ ကအပျိုတွေအတွက် သုံးခန်းရှိတယ်” “ဒါဆို ဟိုရှေ့နားက အဝင်ဝမှာ ခြင်းခတ်နေကြတဲ့ ယောကျာ်းလေးတွေ အားလုံးက အပေါ်မှာနေကြတာပေါ့ ”“ ဟုတ်တယ်အမ မောင်မင်းကြီးသားတွေက မိန်းမတွေထက် ဘုန်းမြင်တော့ အပေါ်ထပ်မှာနေရတာပေါ့” ကောင်မလေက ခနဲ့တဲ့တဲ့နှင့်ပြောပြနေသည်။
“အစ်မ ကြည့်ချင်ရင် မိန်းကလေးတွေနေတဲ့ အခန်းတွေနဲ့ တခြားနေရာတွေကို လိုက်ကြည့်လို့ရတယ်” ဟုပြောသည်။ ကျမလည်း သူ.စကားအဆုံးတွင် “ဟင် ဟုတ်လား အစ်မလည်းဒီကိုတခါမှ မရောက်ဘူးလို့ လိုက်ကြည့်ချင်တယ်”ဟု အားရဝမ်းသာဖြင့်ပြန်ဖြေ မိသည်။ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကဦးဆောင်ပြီး ကျမကိုခေါ်သွားသည်။ သူတို့နေထိုင်စရာ အခင်းအကျင်းများက ဘယ်လိုမှ စိတ်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်ဖွယ်ရာမတွေ့ရပေ။ ဘိလပ်မြေ ခင်းထားသောကြမ်းပြင်တွင် ဖျာလေးများကိုခင်းထားသည်။ ဖျာတချပ်စာကို သုံးလေးယောက် နေရသည်ဟုဆိုသည်။ တရွာတပုဒ်ဆန်းဆိုသလို အလုပ်ရှင်များ၏ အလုပ်သမားများအပေါ် တွင်ထားသော ဖြစ်ကတတ်ဆန်းစေတနာများအကြောင်းကို ဒီနယ်စပ်မြို့တွင် သုံးနှစ်နီးပါး နေထိုင်လာသောကျမ ကောင်းကောင်းကြားဖူးပေမဲ့ ဒီလိုနဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တော့ တခါမှမတွေ့ဘူးခဲ့။
အမျိုးသမီးတွေနေသောအခန်းလေးများသည် လူတရပ်ကျော်လောက်သာ မြင့်ပြီး ဆန်အိတ်ခွံများကို လက်ချုပ်အပ်နှင့်ဆက်ချုပ်ပြီး ကာရံထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီလောက်ဖြစ်သလိုကာရံထားသည့် ဒီအခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ သူတို့တွေဘယ်လိုများအ၀တ်လဲပါလိမ့်ဟု စဉ်းစားလိုက်မိသည်။ တဆက်တည်း အဝင်ဝတွင်လာစဉ်က ပြောင်စပ်စပ်မျက်နှာပေးများနှင့်ဆက်ဆံသော အမျိုးသား များကို မြင်ယောင်ရင်း ကျမသက်ပြင်းချမိသည်။
“ညီမေ၇ ရေချိုးရင် ဘယ်မှာချိုးရသလဲ” “ဟိုမှာတွေ့လား အစ်မ ဒီဘက်ကကြည့်ရင်မြင်ရတယ်” ကျမလည်း သူပြသောနေရာဖက်သို့ နဲနဲတိုးရွေ့ကြည့်လိုက်တော့ လေးထောင့်အုတ်ကန်ကြီး တကန်ကိုတွေ့ရသည်။ အခုမှပင် ကျမလာစောင့်သော ကျမမိတ်ဆွေကောင်မလေးကိုတွေ့ရသည်။ အုတ်ကန်တဖက်တွင် သီချင်းအော်ဆိုရင်း ဝုန်းဒိုင်းကြဲကာ ရေချိုးနေကြသောကောင်လေးတသိုက်ကြားတွင် အနေကြပ်စွာဖြင့် ရေချိုးနေသော ကောင်မလေးက ကျမကိုတွေ့တော့ ရှက်ရွံ့စွာပြုံးပြသည်။ အရေးမကြီးဘူးဟူသော အမူအရာဖြင့် သူမအား အသာလက်ပြဖြစ်သည်။
စကားပြောလက်စကောင်မလေးတွေကလည်း ကျမအနားကမခွါပေ။ “ဟယ်ညည်းတို့ အလုပ်ပြန်ဆင်းရမယ်မဟုတ်လား ဟိုတယောက်ကလည်း ခုထိေ၇ချိုးနေတုန်းပဲရှိသေးတယ် ဘယ်လိုလဲ” ဟု မေးလိုက်တော့ “မဟုတ်ဘူးအစ်မ ကျမတို့က သိုးမွေးထိုင်စက်ဆိုတော့ သူတို့တွေဆွဲထားတဲ့ အထည်တွေကို စောင့်နေရတယ်လေ။ အခုရက်ပိုင်းခြည်ပြတ်တော့ အလုပ်မကောင်းဘူး။ ကျမတို့ထိုင်စက်သမားတွေ အေးအေးဆေးဆေးပေါ့။ အဟားငွေထုတ်တော့လည်း အေးအေးဆေးဆေးပဲလေ နဲနဲပဲရတယ်” ဟု ရယ်ရင်းပြောသည်။ ဘဝအမောတွေကို ရယ်မောပြီး ပြောနိုင်အောင်သူတို့ဒုက္ခတွေကို ကျော်လွှားလာ၇တာ ဘယ်လောက်တောင် နေသားကျနေပြီလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့ရသည်။ “ေ၇တခွက်လောက်တိုက်ပါလား အစ်မေ၇ဆာလိုက်တာ” ဆိုတော့ “အားနာတယ်အစ်မ ပိုက်ကလာတဲ့ရေကိုပဲ သူဌေးက ပေးသောက်တယ်”။ “ဟုတ်လား ရပါတယ် အစ်မလည်း ဒါဘဲသောက်မယ်လေ” ဟုပြန်ပြော လိုက်မိပေမဲ့ ကျမအသံက အားသိပ်မရှိလှပေ။ အလုပ်တွေကို ပင်ပင်ပန်းပန်း မနားတမ်းလုပ်ရပေမဲ့ ရေတောင်ကောင်းကောင်းမသောက်ရဘူးဆိုတဲ့အသိက ကျမအသံများကိုအားအင်ချိနဲ့သွားစေတာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ကောင်မလေးတယောက်ပေးသောရေကို သောက်နေစဉ်ပင် ကျမမိတ်ဆွေ ပုံပုံရောက်လာသည်။ “လာလေအမ”ဟုပြောရင်း သူမနေထိုင်ရာ အခန်းလေးကို ရောက်သွားတော့ စိတ်မသက်မသာပိုဖြစ်သွာသည်။ ပလပ်စတစ်များဖြင့် ကာရံထားသောသူမတို့အခန်းသည် အမျိုးသမီးအသုံးဆောင်များ စားစရာ အိုးခွက်၊ ပန်းကန်များဖြင့် ဖျာတချပ်စာ နေရာသည် ခြေချစရာပင်မရှိပေ။“ပုံပုံ ဒီမှာဘယ်နှစ်ယောက်နေလဲ” “သုံးယောက်နေတယ်အမ” “ဟယ် နင်တို့ သူဌေးကလည်း တော်တော်ဆိုးတာပဲ ဒီလောက်စုပြီးကြပ် ပိတ်သိပ်အောင်ထားတယ်” သူတို့သုံးယောက်နေသည်ဆိုသော အခန်းတွင်ထပ်များ အိပ်နေရော့လားမသိ ထိုအထဲတွင်ထမီများ ကိုလေးခေါက်ချိုးခေါက်ပြီး လှန်းထားသည်ကပါသေးသည်။ “ထမီလှမ်းစရာနေရာရော မရှိဘူးလား” “ဟင့်အင်း အစ်မ ဒီလိုပဖြစ်သလိုလှမ်းနေရတယ်၊ နေရာမရှိဘူး” ဟုပြန်ပြောသည်။“ဟိုဘက် မှာရော ဘယ်နှစ်ယောက်နေလဲ” “ဟိုဘက်အခန်းတွေကကျယ်တော့ တခန်းကို လူနှစ်ဆယ်လောက် ဆန့်တယ်လေ။ အဲဒီအခန်းမှာ အစ်မနဲ့သိတဲ့ မငယ်ရှိတယ်လေ သွားကြည့်မလား” “ အေးအေး ခဏနေမှသွားရအောင်၊ ညည်းအက်ျီလဲလိုက်ပါအုံး” ဟုပြောရင်း အခန်းကာထားတဲ့ ပလပ်စတစ်ဖက်ကိုကြည့်မိတော့ ယောကျာ်းတယောက်ဖြတ် လျှောက်သွားရင်း ပြူးတူးပြဲတဲ ကြည့်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ အမလေး ဘယ်လိုဟာတွေဘာလိမ့် လို့တွေးမိလိုက်သည်။ “ပြီးပြီ အစ်မသွားရအောင်”ဟု ခေါ်သည်။ “မငယ်ကရှိလို့လား သူအလုပ်သွားရင် သွားနေမှာပေါ့” “အတူတူပဲအစ်မရဲ့ သူလည်းအလုပ်နားနေတယ် အိုတီမရှိဘူး” ဟုပြောသည်။ ကျမတို့မငယ်ရှိရာ အခန်းလေးအရောက် လိုက်ကာလေးကိုလှန်ပြီး ဝင်လိုက်တော့ သနပ်ခါးလိမ်းနေသော မငယ်အနားတွင် လက်ဖက်သုတ်နှင့်ညစာကို ကပျာကယာစားနေသော ကောင်မလေးက အစ်မထမင်းဝင်စားပါလားဟု နှုတ်ဆက်ရင်းပြောသည်။ မငယ်က ကျမကို နုတ်ဆက်သည့် ကောင်မလေးအား “ညည်းသိလားဒီအစ်မကို ” “သိတာပေါ့ ဟိုတခါ စကားဝိုင်းတခုမှာ အစ်မပါတယ်လေ” ဟုပြောမှ မမှတ်မိတာကို အားနာသွားရသည်။ “အော်ဟုတ်လား အစ်မကလူ တွေများနေတော့လေ သိပ်မမှတ်မိဘူး” “ရပါတယ်အစ်မက မမှတ်မိပေမဲ့ ကျမကအစ်မကို မှတ်မိတာပဲ ပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ် ဒါပေမဲ့ အားနာတယ်အစ်မရယ် ဘာမှလည်းစားစရာမရှိဘူး ခဏနေ ညီမအလုပ်ဆင်းရတော့မယ် နောက်တောင်ကျနေပြီ ရေချိုးကန်မှာနေရာမရှိလို့ စောင့်နေတာနဲ့ ကြာသွားတာ အဲဒါ လိုင်းဆရာတွေက နောက်ကျတာသိရင်ဆူအုံးမယ်” “ဒါဆိုမြန်မြန်လုပ်လေညီမရဲ့ အဆူမခံရအောင်သွားပါ” “ဒါပေမဲ့ အစ်မရေ သူဌေးစိတ်ကြိုက် လိုက်လုပ်ပြီး အလုပ်သများတွေကို တချိန်လုံးအပြစ်မရှိ အပြစ်ရှာနေတဲ့ ဒီလူတွေနဲ့တော့ ရိုးနေပါပြီ အစ်မရယ် ကျမတို့က ပေဖြစ်နေတဲ့ ဘကိုးအမရဲ့ တူဖြစ်ရင်တော့လား” ဟုအံကြိတ်ပြောပြီး အလုပ်ရုံရှိရာဘက်သို့ ကသောကမျော ပြေးထွက်သွားသည့် သူမကျောပြင်ကို ကြည့်ရင်း ကျမရင်ထဲတါင် တင်းကျပ်သွား သည်။ ကျမတို့စကားပြောနေစဉ် ယောကျာည်းတွေနေသည်ဆိုသော လူတရပ်သာသာမြင့်သည့်အထပ်ခိုးမှ ဇော်ဝင်းထွတ် သီချင်းသံ ကျယ်ကျယ်ကြားရတော့ “ဘယ်လိုလဲမငယ် ဆူညံနေတာပဲပါလား” “ဟုတ်တယ်အစ်မရေ သူတို့လည်း ကျမတို့လိုပဲ အလုပ်မဆင်း၇တဲ့ သူတွေပဲပေါ့ စိတ်ညစ်တာတော့မပြောနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အားနာရကောင်းမှန်းလည်း မသိ ၊ လူပျိုတွေက ညညဆို ရင်လည်းမူးပြီး ရန်ဖြစ်ကြ ၊ အော်ဆဲကြ ၊ အိမ်ထောင်သည်တွေက မူးရင်မိန်းမတွေကို ရိုက်ကြနှက်ကြနဲ့။ ကျမတို့ နားအေးပါးအေးအိပ်ရတယ်ကိုမရှိဘူး တခါတလေ သူတို့ ရန်ဖြစ်သံကြားတော့ လူကအိပ်မောကျနေရာကလန့်နိုးတာပြန်အိပ်လို့ မရတော့ဘူး သူတို့ရှေ့ ဖြတ်သွားရင်လည်း ဟိုပြောသည်ပြောနဲ့ လမ်းတောင်ဘယ်လိုလျှောက်ရမှန်းမသိဘူး ဒီကကောင်တွေ အများစုက စိတ်ဓာတ်သိပ်အောက်တန်းကျတယ်အစ်မရဲ့ ဒီလိုမနေချင်ပေမဲ့လည်း ကျမတို့ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူးလေ ဖြစ်သလိုနေရတာပဲ” သူဌေးကိုရော အိမ်ထောင်သည်တွေရန်ဖြစ်တာ ၊ လူပျိုတွေမူးရင် သောင်းကျန်းတာတွေကို မတိုင်ဘူးလား” “အမလေး အစ်မရယ် ပြောပါသကော သူဌေးက အလုပ်သမားတွေ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်သူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး နေစရာပေးထားတယ် နေတတ်သလိုနေ ပြသနာတွေဖြစ်ရင်လည်းတာဝန်ယူမယ်မထင်နဲ့ သူနဲ့ဘာမှမဆိုင်သလိုနေတာပဲ ။ အစ်မကို အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပြောပြရဦးမယ် ဟိုတနေ့ကလေ စက်ရုံထဲမှာ နေ့ဆိုင်းညဆိုင်းနဲ့ တနေကုန်အလုပ်မနားတမ်းလုပ်ပြီး အိပ်မောကျနေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို အမျိုးသားတယောက်က ညည့်နက်အချိန်အခန်းထဲဝင်ပြီး ဟိုကိုင်ဒီကိုင်သွားလုပ်တယ်လေ။ အမျိုးသမီးက လန့်နိုးတော့ ဟိုကောင်က သူ့ပါးစပ်ကိုပိတ်ထားပြီး တိတ်တိတ်နေဖို့ပြောတယ်တဲ့ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသမီးကကြောက်လန့်တကြားရုန်းပြီး တအားအော်လိုက်တော့ ကျန်တဲ့သူတွေ နိုးကုန်ကြတယ်လေ စက်ရုံပိုင်ရှင်ကို တိုင်ပင်ပေမဲ့လည်း ဘာမှဖြေရှင်းမပေးဘူးလေ” ကျမရင်ထဲတွင်မခံချင်စိတ် ဝမ်းနည်းစိတ်များစုဆုံသွားသဖြင့် ဘာမှမမေးနိုင်ပဲ ဆွံ့အသွားသည်။ အမျိုးသမီးအချင်းချင်းမို့ထင်ပါရဲ့ ကျမမမေးမိပေမဲ့ ကျမရင်တွင်းက သိချင်နေသောအကြောင်းများကို ဆက်ပြီးပြောပြနေသည်။ အလုပ်ရှင်က ဘာမှရှင်းမပေးတော့ အဲဒီလူလည်း ခုအခုပ်ဆင်းနေးတယ် ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့သူကိုသူမတို့ ရွံကြောက်ဖြစ်ပြီး မမြင်ဟန်ဆောင်နေတာကလွဲလို့ ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး ဆိုတာလည်းပြောပါသည်။
“ဟင် အဒီလောက်တောင် အတင့်ရဲတယ်”ဟုသာ ကျမပါးစပ်ဖျားမှတုန့်ပြန်ရင်း အတွေးနှင့် ငြိမ်သက်နေခဲ့မိသည်။
သူတို့လေးတွေနေ့စဉ်နေ့တိုင်း စားသောက်ရသော အခြေအနေများကို မျစ်စိရှေ့မှောက်မှာ တွေ့နေရလို့ အံ့သြနာကျင်လို့ပင် မဆုံးသေး နောက်ထပ်သတင်းများက ကျမကိုပိုရွေ့ မှင်သက်မိသွားစေပြန်သည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမနှင့်ဆုံတုနုးဆုံခိုက်မှာ ကိုယ်သိထားတာလေးတွေ မျှဝေလိုက်တာက သူတို့ရောကိုယ်ရော အကျိုးမယုတ်ပါဘူးလေ ဟုတွေးရင်း သက်ပြင်းရှည်ကြီးကို ဟူးကနဲမှုတ်ထုတ်လိုက်မိသည်။
“အေး ညီမတို့ သိအောင်အစ်မတခုပြောပြမယ် ဒီနေ့ဘာနေ့လဲသိလား” “သိတာပေါ့အမရဲ့ မတ်လရှစ်ရက်နေ့လေ” “ ညီမရဲ့ရှစ်ရက်နေ့တော့ဟုတ်ပါပြီ အထူးသတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့ကို သိလားလို့မေးတာပါ” “အင်း အဲဒါတော့မသိဘူး”ဟု ပြုံးစိစိနဲ့ ပြန်ပြောသည်။ “အင်းဒီနေ့က နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့လေ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က အဲဒီအခမ်းအနားကို ပုံပုံနဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေတက်ကြတယ် သူပြန်မပြောဘူးလား” “ကျမတို့ကဒီစက်ရုံကိုရောက်တာ ခြောက်လလောက်ပဲရှိသေးတယ် ပုံပုံနဲ့ကလလည်း ခင်တယ်ဆိုပေမဲ့ အ၇မ်းရင်းနှီးတာ မဟုတ်တော့ စကားတွေလဲမပြောဖြစ်ဘူး” “အေးပါ အစ်မက သိစေချင်လို့ပါ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ညီမတို့နေတဲ့နေရာလေးအထိေ၇ာက်လာပြီးတွေ့ရတာကိုဝမ်းသားလို့ ပြီးတော့လဲ ဒီနေ့လို အမျိုးသမီးများအတွက် ထူးခြားတဲ့နေ့လေးအကြောင်းကို ပြောပြချင်လို့ စကားစနေတာပါ” ကျမစကားကိုငြိမ်သက်စွာနားထောင်နေကြသောသူတို့မျက်နှာမျာကိုကြည့်ရင်း မှ ကျမပြောချင်သောစကားကို ခပ်သွက်သွက်ပြောဖြစ်သည် ။ “ဒီနေ့က နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့ လေ နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့ဆိုတာက ဟိုးအရင်တုန်းကတည်းက ခုလိုအမျိုးသမီးတွေကို အလုပ်ချိန်ပိုခိုင်းခဲ့တာ ပြီးတော့ အလုပ်အားခကို နည်းနည်းလေးဘဲပေးတာ ဒါတွေကိုဆန့်ကျင်ပြီး အလုပ်ရှင်တွေကို အလုပ်ချိန်လျှော့ပေးဖို့ လုပ်အားခတန်ရာတန်ကြေးပေးဖို့ ပြောပြီး အမျိုးသမီးပေါင်းများစွာ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တာ အခုဆို အချို့နိုင်ငံတွေမှာ အဲဒီအခွင့်အရေးတွေ ရကုန်ပြီလေ နောက်ပြီးတော့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင် လုံခြုံခွင့်တွေပါတယ်။ ခုနကပြောသလို အဖြစ်ပျက်မျိုးတွေ မရှိအောင်အလုပ်ရှင်က အမျိုးသမီးတွေအတွက် နေမှုထိုင်မှုတွေမှာ စိတ်ချလုံခြုံအောင် ဖန်တီးပေးရမယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့လို မတ်လ ရှစ်ရက်နေ့အဖြစ်ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂက သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပေါ့” ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ရှင်းပြလိုက်သော ကျမစကားကို နားထောင်ရင်း ပြန်မေးချင်ပုံရသော်လည်း မိုးချုပ်ရင် ဆိုင်ကယ်မောင်းပြန်တာ မလွယ်ဘူးဆိုတာ သိထားသောကြောင့် လက်မှ နာရီကို ငုံ့ကြည့်မိသည်။ “အစ်မရေ ခြောက်နာရီခွဲတော့မယ် မိုးချုပ်တော့မယ်နော် ခဏနေရင် ကျမတို့အဆောင်တံခါးလည်း ပိတ်တော့မယ်” စကားဝိုင်းမှကောင်မလေးတယောက်က အလိုက်သိစွာပင် သတိပေး စကားပြောလာသည်။ “အေးဟုတ်သားပဲ စကားကောင်းနေလိုက်တာ အစ်မပြန်တော့မယ်နော်”။ “ကျမတို့ အပေါက်ဝအထိလိုက်ပို့ပေးမယ်” ကျမတို့သုံးယောက်ထွက်လာတော့ အပေါ်ထပ်က သီချင်းနားထောင်နေသော အမျိုးသားတသိုက်ထံမှ ကြားရသော မိန်းမများမြင်လျှင် ပျိုမှန်းအိုမှန်း မသိပေမဲ့ ပြောနေကျ ပုရိသာတို့အသံများကို နားထဲမှ ခါထုတ်ရင်း ကျောခိုင်းထွက်ခွါလာလိုက်မိသည်။
ရေဒီယိုကို နားထောင်နေကျဖြစ်သောကျမက အမျိုးသမီးများနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းများကို ဆိုလျှင် မသိစိတ်ရော သိစိတ်မှာပါပိုမိုနိုးကြားစွာနားထောင်ဖြစ်ရင်း ကျမဖြတ်သန်းခဲ့ရသော လက်တွေ့ဘဝမှအဖြစ်အပျက်များနှင့် ယှဉ်တွဲမြင်ယောင်မိမြဲပင်ဖြစ်သည်။ ရေဒီယိုမှ သတင်းအစီစဉ် တွေ ဘယ်အချိန်က ပြီးဆုံးသွားလိုက်သည်ကို ကျမသတိမထားမိလိုက်ပေ။ သတင်းအပြီး လေလှိုင်းသံခပ်ပြင်းပြင်းကိုကြားလိုက်ရမှ အတွေးစပြတ်ကာ ရေဒီယိုကို ယောင်ရမ်းပိတ်လိုက် မိသည်။
သို့ပေမဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသူအမျိုးသမီးများ၏ လှုပ်ရှားမှု ဘဝပုံရိပ်များက ကျမနှလုံးအိမ်ကို ညို့ယူဖမ်းစားထားဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ လိုနေ့မျိုးကို ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အမျိုးသမီးတိုင်း သတိတရဖြစ်နေပြီးနေ့စဉ်နှင့်အမျှကြုံတွေ့နေရသော အမျိုးသမီးများအပေါ် မတရားဖိနှိပ်မှုများကို မှန်ကန်စွာတုန့်ပြန်နိုင်ပါစေဟု တိုးတိုးလေး ဆုတောင်းပေးလိုက်မိသည်။……………
Posted by daw nwe at 1:32 AM No comments:
ဒီစာစုလေးကလည်း မစိုးအတွက် ဒုတိယစာစုပါ။ ကိုယ့်ယောက်ျားနဲ့သူ့ ယောက်ျားက တိုက်ဖေါ်တိုက်ဖက်ဖြစ်သလို စခန်းတခုထဲမှာ မိသားစုလိုက် အကြာကြီး အတူနေခဲ့ရဆိုတော့ သူခံစားရသမျှတွေဟာကိုယ်ခံစားရသလို ခံစားခဲ့ရတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ထက်မိုးတင်လေး ဆုံးတော့ ကိုယ့်မျက်စိရှေ့ မှာ မွေးခဲ့တဲ့ကလေး နောက် သမီးငယ်လေး နဒီသော်ထက် ရက် ၂၀ ပဲ ကြီးတဲ့ကလေးမို့အတော်ကို ၀မ်းနဲနာကျင်ခဲ့ရတာပါ။ သူတို့ငယ်ငယ်က တပါတ်တခါ မယ်လစခန်းထဲက ဇုံအေက ဆေးရုံမှာ အဟာရအတွက်ပေးတဲ့ ကြက်ဥတို့ပဲဝါလေးတို့ ကို သွားထုတ်ရင်လည်း အတူတူသွားရတာ။ ကလေးလေးတွေကို ဖအေတွေရဲ့ ပုဆိုးဟောင်းလေးတွေနဲ့ လွယ်ပြီး ကားလမ်းမတလျောက် လမ်းလျှောက်ပြီး စကားတပြောပြောနဲ့ သွားရတာဆေးရုံသွားဖေါ်သွားဖက်လေ။ ဆေးရုံက အဲလိုပေးတာ ကလေး ၉လသားအထိဆိုတော့ အတူအသွားအတူလာကြရတာ။ ဒါထက် မိသားစုတွေနေတဲ့ အိမ်လေးတွေကလည်း ချောင်းလေးတခုသာခြားတဲ့ တပ်ရင်းမိသားစု အိမ်ယာဝန်းလေးဆိုတော့ တမိသားနဲ့ တမိသား အလွန်ကို နီးနီးစပ်စပ် နေထိုင်ခဲ့ရတာလေ။ ညီအမတွေဖြစ်သလို မိန်းမချင်း ကိုယ်ချင်းစာစိတ်တွေကပါ လွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်ပေါ်ခံစားရရင်း ကြိုးစားပြီး ရေးမှတ်ခဲ့တာပါ။
ဟောဒီ မှိုင်းအုံ့နေတဲ့ မိုးသားညိုညိုတွေက သူမနှလုံးသားကို အငြိုးတကြီးနှင့် အမြစ်ပါမကျန်အောင် ထပ်မံဆွဲနှုတ်သွားပြန်ပြီဟု ရင်နာနာနှင့်တွေးဖြစ်လိုက်သည်။ တဖန် ကိုယ့်ဘဝကို အထီးကျန်အောင် နှိပ်စက်တတ်တဲ့ မိုးကို အပြစ်မြင်နေတတ်ခဲ့ပြီ။
တောင်လှန်မြေဖြစ်တဲ့ အလယ်ပိုင်းဒေသမှာ သူပုန်ကျောင်းသားတွေနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး သူမလို ခင်ပွန်းသည်တွေနောက်ကို လိုက်ပါလာကြသည့်ရဲဘော်ရဲဘက် သူငယ်ချင်းမတွေ ရဲ့မျက်နှာကို တိတ်တဆိတ် လိုက်လံကြည့်ရှုရင်း သူတို့တတွေကတော့ ကံကောင်းလိုက်ကြတာ၊ ငါ့လိုသောကတွေ မခံစားကြရဘူးဟု အားငယ်စွာလည်း တွေးဖြစ်လိုက်သည်။
သူမကိုမှ ရွေးချယ်ပြီးဒဏ်ခတ်တဲ့ ဘူရားသခင်ကို အပြစ်တင်ချင်စိတ်က ရောက်လုလုအချိန်တွင်သာသနာ့ဝန်
ထမ်း အမျိူးသမီးများ၏ အေးငြိမ်းသောအသံက သူမနားစည်သို့ချိုသာစွာ ဝင်ရောက်လာသည်။ ‘ကံကြမ္မာက ကိုယ့်တယောက်တည်းကိုမှ လုပ်ရက်လေခြင်းလို့ အပြစ်မတင်ပါနဲ့ ဘုရားသခင်က သူဖန်ဆင်းတဲ့လူသားတွေကို သူကိုယ်တိုင် ရုပ်သိမ်းသွားတာ ဘာများငြိုငြင်ဦးမှာလည်း’ ဆိုတဲ့ ဓမ္မတေးသံက သူမရဲ့စိတ်ဆင်ရိုင်းကို အချိန်မှီ ချွန်းအုပ်စေနိုင်ခဲ့သည်။တကယ်တမ်းသူမဘာများ တတ်နိုင်ပါဦးမည်နည်း။ ဒါပေမဲ့ ချစ်သူကိုဆုံးရှုံးပြီး သားသားကို ထပ်မံဆုံးရှုံးရတော့ ဘုရားသခင်ကို အပြစ်မတင်မိပေမဲ့ ပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့သူမ ကိုယ့်ကို အလဲထိုးတဲ့ ကံကြမ္မာကိုတော့ ရိုးမယ်ဖွဲ့ချင်ခဲ့ပါသည်။
သူမဘဝထဲမှ သံယောဇဉ်အရှိဆုံးလူသားတွေကိုမှ ဘာကြောင့်များရွေးပြီးခေါ်ဆောင်သွားတာလဲလို့ ရင်ထဲတွင် အော်ဟစ်မေးနေမိသည်။ နှစ်နှစ်ဆိုတဲ့ သိပ်မရှည်ကြာတဲ့ ကာလတွေအတွင်းမှာ သူမ အရင်းနီးဆုံးသူနှင့် အချစ်ဆုံး သားငယ်လေးကို သူမဘဝထဲမှ ရက်ရက်စက်စက်နှင့်ခွဲထုတ်သွားခဲ့သည်။
သားဘဝရဲ့ငါးနှစ်ဆိုတဲ့ သက်တမ်းကလေးမှာ မို့မိုကိုခွဲခွါသွားလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မတွေးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ နာတာရှည်သားကို တခြားကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ ကလေးတွေလိုအများကြီးမျှော်လင့်မထားမိပေမဲ့ ဒီလို ရုတ်တရက်ခွဲခွါသွားလိမ့်မယ်လို့ဘယ်တုန်းကမှ မတွေးဖြစ်ခဲ့မိပေ။သားပ့ါပါရဲ့နာမည်ကိုခေါ်ရင်း သားအဖတွေ ဆုံနိုင်ပါစေလို့ မသေချာတဲ့ ဆုတောင်းတွေကိုလည်း ရင်နှင့်အပြည့်ဆုတောင်းမိပါရဲ့။ သားသားရေ…..ပ့ါပါကို တွေ့အောင်ရှာပါလို့လဲ ကယောင်ကတမ်း အောင်မိတယ်ထင်ပါရဲ့။ သူမဦးနှောက်နှင့် နှလုံးသားတစုံတွင် အသိစိတ်တွေ ကင်းစင်လျှက်ရှိသည်။
မသန်မစွမ်း အပြစ်မဲ့သားငယ်က သူမကိုမပွင့်တပွင့်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်း နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လို့နေသည်။
သားလေး အိပ်စက်လဲလျောင်းနေရာ အခေါင်းနှုတ်ခမ်းကိုမေးတင်ရင်း နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် သားလေးနဖူးပြင်ကို အကြိမ်ကြိမ်ပွတ်သပ်နေမိသည်။ သားသားနဖူးတွေကလည်း အေးစက်နေလိုက်တာ ။ သားနဖူးတွေ အေးစက်နေပေမဲ့ သူမရင်ထဲမှာတော့ သောကတွေက မီးတောက်တွေအလား ပူလောင်လှသလို အရာရာသည် မှောင်အတိဖြစ်နေခဲ့သည်။ မျက်ဝန်းကပူနွေးနွေး မျက်ရည်စတွေက ပါးပြင်ပေါ်သို့ဒလဟော ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသွားသည်။ ရင်ထဲတွင် သားရေ… သားရေဟု အခါခါရေ၇ွတ်ရင်း သားလေးအား နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် မျက်တောက်မခတ်ပဲ စိုက်ကြည့်နေဖြစ်သည်။ သုသာန်တစပြင်က ပကတိ ချောက်သွေ့လို့နေသည်။ မှိုင်းညို့နေတဲ့ မိုးသားညိုတွေက ရိုးတန်ပြိုင်းပြိုင်းဖြင့် ငေါင်စင်းစင်းဖြစ်နေသည့် တောလေးကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။ မကြာခင် မိုးစက်ပွင့်လေးတွေကလည်း ဟိုတပေါက် ဒီတပေါက် တဖျောက်ဖျောက်နှင့် သားလေး၏ နောက်ဆုံးခရီးကို လိုက်ပါပို့ဆောင်သူများ၏ ခေါင်းပေါ်သို့ ဖြည်းညင်းစွာ ကျလာသည်။ ထိုစဉ် သင်းအုပ်ဆရာ၏ တရားဟောသံနှင့် ဓမ္မတေးသံများက ဝန်းကျင်၏ တိတ်ဆိတ်မှုကို စတင်ဖြိုခွင်းလိုက်သည်။ အေးချမ်းလှတဲ့ ဓမ္မတေးသံက သူမနားစည်ကနေခန္ဓာကိုယ်အနှံ. အေးစိမ့်စွာ ဖြတ်သန်းသွားသည်။ ”ဒေါ်ကူးရေ ..စိတ်ထိန်းပါကွာ၊ ဒီလိုပါပဲ ၊လောကမှာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေ မဖြစ်ရသလို ကိုယ်မဖြစ်ချင်တာတွေလည်း ဖြစ်ရတတ်တယ်” အသံတစ်ခု နားထဲတွင်ကြားမိလိုက်သလိုပဲ။ ဒါပေမယ့်သူမ တကယ်ကြားလိုက်ရသည်က လေတိုးသံခပ်ပြင်းပြင်းသာဖြစ်သည်။ ထို့နောက် သူမဝန်းကျင်ကို ကယောင်ချောက်ချားဖြင့် လှည့်ကြည့်ဖြစ်သည်။ ဝန်းကျင်ရှိမိတ်ဆွေအားလုံးက သူမအား စိုးရိမ်တကြီးနှင့် ကြည့်နေကြသည်။ သူမနာမည်အားတတွတ်တွတ်ခေါ်ကြရင်း သတိပေးနေကြသည်။ သူမဘေးနားတွင် စိုးရိမ်တကြီး ထိုင်ကြည့်နေတဲ့ ဘဝလက်တွဲဖော်ကို အားမနာနိုင်လောက်အောင်ရင်ထဲတွင် သောကများက အပြည့်နေရာယူထားသည်။ သူမသတိလက်လွတ်ဖြစ်မသွားပါ။ သူမအားသတိပေးသံတွေက သူမနားစည်ကိုရိုက်ခတ်တလှည့် မခတ်တလှည့်။ ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေရင်း သူမစိတ်တွေက သူမဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ဘဝရဲ့ သံစဉ်များဆီသို့တရကြမ်း တိုးဝှေ့ထွက်ခွာသွားသည်။
သားသားကလဲသူ့လိုပဲ သူမကိုထားခဲ့ပြန်ပြီ။ သူမဘာများတတ်နိုင်ဦးမှာလဲလို့ပဲ ပြောချင်ပါရဲ့။ သူမရှိတော့တဲ့ ဒီနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ သူမဘဝတွေကလည်း ကဘောက်တိကဘောက်ချာ ဖြစ်ကုန်ပြီလို့ ဝန်းကျင်က သမုတ်လေရဲ့။ သူချန်ထားပြီးတော့ သူမဘဝက မျှော်လင့်ထားသည်ထက်ပိုပြီး ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းခဲ့သည်။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် မုဆိုးမဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သူမမှာ ခေါင်းစဉ်တပ် ဖော်ပြလို့မရနိုင်တဲ့ မိတ်ဆွေမမည် ရန်သူမမည်တဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ထိုစိန်ခေါ်မှုတွေ အားလုံးကို သူမအံကြိတ်ရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့သည်။ တခါတရံ ထိုသို့ ကြုံရချိန်များတွင် အံကိုတင်းတင်းကြိတ်ကာ အမေဟု ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့နှင့် မိခင်ကို တမ်းတခဲ့ဖူးသည်။ မတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အမေက သူမအား အားတင်းရင်ဆိုင်ပါ သမီးရယ် .. ဟုပြောသယောင် ကြားယောင်ရင်း အခက်ခဲများကို စိတ်ဓာတ်ခွန်အားနှင့် ကျော်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ သူမဘဝတွင် တော်လှန်ရေးအတွက် ပေးဆပ်ရမှာပေါ့ဟူသော စကားလုံးကြီးကြီးကို မသုံးချင်ပေမယ့် သူပုန်ဖြစ်သောသူနှင့် သားလေးအတွက် သူမဘဝရဲ့ အချိန်တော်များများကို ဖဲ့ထွင်ပေးဆပ်ခဲ့ရသည်။
သူ သက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်က တော်လှန်မြေရောက် သူမသည် အမျိုးသမီး အဖွဲ.အစည်းတစ်ခု၏ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သားလေးကို မမွေးဖွားခင်အချိန်အထိ အမျိုးသမီးရေးနှင့်ပတ်သက်သော သင်တန်းများ ဆွေးနွေးပွဲကို လေ့လာခွင့်ရရှိခဲ့ဖူးသည်။ ပညာတတ်ကြီးမဟုတ်ပေမယ့် သွက်လက်ဖြတ်လတ်သောသူမက လက်တွေ့ဘဝနှင့်ယှဉ်၍ အတွေ့အကြုံတွေဖလှယ်နိုင်ခဲ့သည်။ သားလေးကိုမွေးဖွားပြီးနောက် သူမ စိတ်ဝင်စားရာအရာများနှင့် လိုအပ်ချက်များကို သူမစိတ်ဝင်စားရာအရာများနှင့် လိုအပ်ချက်များကိုအခြေအနေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လက်လွှတ်ခဲ့ရသည်။ သူမဘဝတွင် ကိစ္စအတော်များများကို လစ်လျူရှုလျက် သားလေးကျန်းမာရေးအတွက်စိတ်ရောလူပါ အချိန်ပြည့်ပေးဆပ်နေခဲ့ရသည်။ ထိုသို့ပေးဆပ်ရမှုကိုလည်း သူမမိခင်ကောင်းပီပီကျေကျေနပ်နပ် ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ သူမကောင်းကောင်းမှတ်မိနေသေးသည်။ တောင်လှန်မြေရောက် သူမတို့မိသားစုဘဝတွင် အိမ်တွင်းကိစ္စနှင့် သားကိစ္စများကို အများအားဖြင့် သူမသာလျှင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူဖြစ်ခဲ့သည်။ သူယုံကြည်ရာနှင်ပတ်သက်လျှင်တော့ သူမဘယ်တုန်းကမှ တိုးမပေါက်ခဲ့ပေ။ မိန်းမကို စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့သူက အမိပြည်ကို ခင်တွယ်လွန်းသဖြင့် သားသမီးကိုပင် လှည့်မကြည့်တမ်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတော့ သူမသားလေးတွင် အလွယ်တကူ ကုသလို့မရနိုင်သည့်ရောဂါရနေပြီ ဆိုတာသိပေမယ့် အံကိုတင်းတင်းကြိတ်လျှက် သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း မိခင်အတ္တနှင့် သောကများကို သူမဖာသာကြိတ်မှိတ်ဝါးမျိုရင်း သူကျင်လည်ရာ ဒီဝန်းကျင်မှာ မိန်းမတယောက်ရဲ့ စွမ်းရည်နှင့် သတ္တိတွေကို အစွမ်းကုန်လစ်ဟပြခဲ့ဖူးသည်။
သူမရှိတော့ပေမယ့် တော်လှန်မြေမှာဆက်လက်နေထိုင်နေတဲ့ သူမရင်ထဲမှာ တောက်လှန်စိတ်တွေက သန္ဓေတည် ရင့်သန်နေဆဲပါပဲ။ ထိုရင့်သန်စိတ်တွေနှင့်ပင် ဟောဒီတော်လှန်မြေမှာ သူမစိတ်လုံခြုံစွာနှင့် ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်နေခဲ့မိသည်။ သို့ပေမယ့် နယ်မြေပိုင်းခြားကန့်သတ်လို့မရနိုင်တဲ့ စိတ်တန်ခိုးတွေဖုံးလွှမ်းရာ ဝန်းကျင်က သူမရင်ကိုနာကျင်မှုတွေပေးနေတာ ကာယကံရှင် သူမကလွဲရင် ဘယ်သူပိုသိနိုင်မှာလဲ. မိန်းမသားတွေက ဟောဒီလောကမှာ ရှင်သန်နေရာတာ ဘယ်လောက်တောင် လုံခြုံမှုမဲ့တယ်ဆိုတာ လူသားအားလုံးမသိရင်တောင် မိန်းမသားတိုင်း ကိုယ်ချင်းစာနိုင်ကြပါသည်။ မိန်းမသားတိုင်းဆိုသည်ထက် ဘဝတွင်မုဆိုးမနှင့် တခုလပ်မိန်းမတွေက ပိုမိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာ လျှောက်လှမ်းရတတ်တသည်ဆိုသည်ကို ကိုယ်တွေ့ကြုံတဲ့သူမ ဘဝနှင့်ရင်းပြီး နားလည်ခဲ့ရသည်။ သူဆုံးပါးပြီးနောက် သူ၏အရိပ်နှင့် အငွေ့အသက်များက သူမကိုအလွန်အစွမ်းထက်သည့် ဆေးခါးကြီးတခွက်နှယ် သက်ရောက်စေခဲ့တာ ဘယ်သူသိနိုင်မှာလဲ။ သူမရင်ထဲမှာတော့ ထိုဆေးခါးကို သောက်ရတာ ရင်တွေနာကျင် လွန်းလှသည်။ လောကဝန်ကျင်က သူမနှင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစုအရေးထက် သွားလေသူ၏ ဂုဏ်ရှိန်တွေကြားတွင် သူမအား အားငယ်စွာမွန်းကျပ်စွာ လှောင်ပိတ်ထားလိုကြဟန်တူသည်။ ဘက်နှစ်ဘက်ကြားက သူမမလူးသားမလွန့်သာဖြင့် ဘဝကိုဖြတ်သန်းရတာများတွေ့ရင် သူဘယ်လို ဟာသနှောပြီးပြောဦးမှာလဲ ကြားချင်စမ်းပါဘိ။
သူမကျင်လည်ရာဝန်းကျင်တွင် နေ့စဉ်ဘဝတွေက ချိုမြိန်သယောင်နှင့် ခါးသက်နေတာ ဘယ်သူသိနိုင်မှာလဲ။ သူမနှင့်အရင်းနီးဆုံးရဲဘော်ရဲဖက်ပမာ၊ ညီအမပမာ နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ မိတ်ဆွေများအား ရင်ဖွင့်ချင်ပေမယ့် သူမအခွင့်မသာခဲ့ပါဘူး။ အရေးအကြောင်းပေါ်လာလျှင်တော့ ထိုသူတွေက သူမကို လာရောက်အားပေးလေ့ရှိကြသည်။ ဒါကိုရော သူမဘယ်လိုတံ့ပြန်ရမှာလဲ ။ ဟောဒီ လွတ်မြောက်နယ်မြေရှိသူမဘဝက ပျံစမ်း…………နင်ပျံချင်သလောက်ပျံစမ်းဆိုပြီး လွှတ်ထားပေးခြင်း ခံရပေမယ့် တောင်ပံတစုံတွင် ဒဏ်ရာရနေသည့် ငှက်ငယ်နှင့်တူနေတာ ဘယ်သူတွေ သိနိုင်ပါသလဲ လောကကြီးကို ဟစ်အော်၍ မေးလိုက်ချင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးတော့ အသက်သုံးဆယ်မပြည့်သေးသည့် မုဆိုးမ ပူပူနွေးနွေးလို့ သမုတ်ခံရတဲ့သူသမက ကျားနာတစ်ကောက်ရဲ့နာကြဉ်းမှုကို ခွာချခဲ့ပြီး သူမဘဝ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် စိတ်နှလုံးစေခိုင်းချက်အတိုင်း ဘ၀ကို လက်တွေ့ကျကျနှင့် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်နိုင်ရန် အစွမ်းကုန်အားထုတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချရာတွင်မည် သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ဆီကမှ အကူအညီ တောင်းခံခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့သလို သူမဘယ်သောအခါမှ နောင်တရနေမှာလဲမဟုတ်ပါ။ သူမ သူ.ကို လက်ထပ်ခဲ့စဉ်ကလိုပဲပေါ့။
ဒါပေမဲ့လေ သားလေး၏နောက်ဆုံးခရီးနဲ့သူမဘဝ၏ အပြောင်းအလဲတွေကို တွေ့ရင်ရော ဘယ်လိုနေမလဲ။ အရာအားလုံးက အပြောင်းလဲကြီး ပြောင်းလဲကုန်ပြီနော်။ ထုံးစံအတိုင်း သူမရေရလည်လည် ဂဃနဏမသိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး အခြေအနေတွေက နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲနေသည်။
နှစ်နှစ်တာကာလက သူမဘဝအတွက်ရော သူမအခြေချနေထိုင်ရာ နယ်စပ်ဒုက္ခသည် စခန်းမှာရော အခြေအနေတွေက တနေ့တခြားပြောင်းလဲလို့နေသည်။ ဒုက္ခသည် အသစ်တွေထပ်မံ စုပြုံပြီး ရောက်လာတာ ၊ သူမအပါအဝင် ဒုက္ခသည်အတော်များများ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များသွာရောက်အခြေချ နေထိုင်ရန် ပြင်ဆင်လုံးပန်းနေတာတွေ၊ ဆယ်စုနှစ်တခုကျော် ခွဲခွာနေခဲ့ရပြီး အခက်အခဲအကြပ်အတည်းမျိုးစုံကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အမိမြန်မာပြည်ရော၊ သူတို့အခြေစိုက်ရာ ကေအန်ယူရဲ့
တပ်မဟာ(၇)ရော အပြောင်းအလဲကြီး ပြောင်းလဲနေတာများ သူ့ကိုတွေ့မြင်စေချင်လိုက်တာ ။ နောက်ပြီး ဟာသဥာဏ်ရွင်ပေမယ့် တောင်လှန်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် အလွန်လေးနက်တည်ကြည်စွာ ပြောပြ၊ ၇ှင်းပြတတ်တဲ့ သူ့ရဲ့ခွန်အားတွေပါတဲ့ စကားတွေကိုနားထာင်ရင်း ဘဝအားမာန်တွေထပ်မံ ဖြည့်တင်းချင်ပါရဲ။
“အာမင်”ဟူသည့်ဆုတောင်းသံက မိန်းမောတွေဝေစွာသံစဉ်များကြား လူးလားခေါက်ပြန်စီးမျောနေသည့် သူမအားဖျတ်ခနဲ လှုပ်ခတ်သွားစေခဲ့သလို အခေါင်းချမယ်မြေဖို့လိုက် ၊ဆုတောင်းလိုက် စသည့်အသံများက သူမအားတုန်လှုပ် ချောက်ချားသွားစေပြန်သည် ။
“သားရေ…တချိန်ကျရင်ကောင်းကင်ဘုံမှာပြန်ဆုံကြအောင်နော်”ဟု သူမတီးတိုးဆုတောင်းရင်း မြေတဆုပ်ကိုသားသားရဲ့မြေပုံမှာပစ်တင်လိုက်မိသည်။ သေတဲ့သူကသေသွားတော့လည်း ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ သူမနှင့်သမီးက လောကကိုအကောင်းဆုံးအလှဆင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရဦးမှာပေ့ါ။ အပြန်လမ်းတွင် နှလုံးသားဗလာနှင့် လမ်းလျှောက်လာသော သူမကိုယ်ပေါ်သို့ မိုးစက်ပွင့်များက အငြိုးတကြီးနှင့် ဖျန်းပက်လိုက်ကြသည်။ သူမပါးပြင်ထက်တွင် မိုးရေများနှင့် သောကမျက်ရည်များရောထွေးကာ အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာစီးဆင်းလျှက်…. …..
မှတ်ချက်။ ။ ပျံကျမိုးများကိုအားဖြည့်လောင်းသူ သူငယ်ချင်း ဒေါ်ကူးအတွက် ။
Posted by daw nwe at 12:23 AM No comments:
ပျံကျမိုးထဲမှ မိုးစက်ပွင့်ဆိုတဲ့ စာစုလေးကို ကိုဘုန်းနိုင် (ကိုထက်မိုး) ကဗျာဆရာ၊ စာရေးဆရာ၊ လက်နှက်ကိုင် တော်လှန်ရေးသမားဖြစ်သူ ဆုံးပါးသွားပြီး တနှစ်အကြာမှာ ကျန်ရစ်သူ သူငယ်ချင်း ဒေါ်ကူး(မစိုး) အတွက် အမှတ်တရရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၅ ၀န်းကျင်မှာ အလယ်ပိုင်းဒေသလို . ခေါ်တဲ့ ကယားပြည်နယ်မှာ ကျမတို့ တွေ စတင်ဆုံးဆည်းခဲ့ကြစဉ်က ကိုထက်မိုးက သူ့ ကိုယ်သူ ကိုဘုန်းနိုင်လို. နာမည်မှည့်ထားခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် အဲဒီတုန်းက ကျမတို့ သိခဲ့တာက ကိုဘုန်းနိုင်ပဲဖြစ်ပြီး သူကွယ်လွန်ချိန်အထိ သူများတွေက ကိုထက်မိုးခေါ်ပေမဲ့ ကျမကတော့ ကိုဘုန်းနိုင်လို့ ပဲ ခေါ်ကောင်းဆဲ။ သူနဲ့ မရင်းနှီးခင် လွိုင်နန်းဖမှာ တပ်မှူးငယ် သင်တန်းတခု ကလလတမှာ လုပ်ကြတော့ ခင်မင်နေတဲ့ မကဒတ ရဲဘော်တွေက အဲဒါကိုဘုန်းနိုင်ပေါ့လို့ ပြောပြစဉ် ကတည်းက ကျမက သူ့ကိုခင်နေခဲ့တာ။ တချိန်တည်းမှာ စာရေးတယ်လို့ သိရတဲ့အတွက် တွေ့ ရင် မိတ်ဆက်ဖြစ်အောင် ဆက်မယ် စကားပြောမယ်ဆိုပြီး တေးမှတ်ထားရင်း နောက်ပိုင်းမှာ မဆုံဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့။ ကျမတို့ တွေ ကလလတ ပန်ကန်းဗဟိုစခန်းကို ပြောင်းသွားကြတော့ မစိုးနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး စခန်းလာစဉ်မှာပဲ မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ရတာပါ။ နောက်တော့ တရွေ.ရွေ.နဲ့ ကျမတို့ တွေ တော်လှန်မြေတွေ တခုပြီးတခုပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ခဲ့ကြတော့ ကံအားလျော်စွာ မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ကျမတို့မိသားစုနဲ့အတူ ကိုဘုန်းနိုင် တို့ မစိုး တို့ မိသားစုနဲ့ ပါ အကြာကြီးအတူဖြတ်သန်းခွင့် နေထိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
နောက်တခုလည်းရှိသေးတယ် ကျမ အမျိုးသားက ကျမကို နောက်ပိုင်းမှာ စာတွေရေးစေချင်စိတ်ဖြစ်လာအောင်ထင်ပါတယ် ကျမအတွက် ဒီဘလော့လေးကို ဖွင့်ထားပေးပြီး ကျမရေးထားတဲ့ စာလေးတွေကို တင်ထားပေးတာပါ။ သူမရှိတော့ ကျမပဲ ကိုယ့်စာတွေကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တင်ဖို . ကြိုးစားပြီး အဟောင်းလေးတွေပြန်ရှာ ပြန်တင်လုပ်နေဖြစ်ခဲ့တာပါ။ မှတ်မှတ်ရရ ကိုဘုန်းနိုင်သမီး စုကြည်မိုးကိုလည်း ဖတ်စေချင်တော့ ပြန်တင်ထားပေးမယ် ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်နော်လို့ ပြောပြီး တင်ထားပေးလိုက်တာပါ။ အချိန်ရရင် မြည်းကြည့်ပေါ့နော်။
ပျံကျမိုးထဲမှ မိုးစက်ပွင့် (ထနောင်း)
ထိုနေ့က မဲဆောက်မိုးသည် အညှိုးတကြီးနှင့် သဲသဲမဲမဲ ရွာချလို့နေသည်။ မိုးနှင့်အပြိုင် သူမရှိုက် တကြီးငိုနေမိခဲ့သည်။ အိမ်ထောင်သက်တမ်းတလျှောက် ဘယ်တုန်းကမှ သူမ သူ့ရှေ့တွင် မငိုခဲ့။ ယနေ့ကဲ့သို့ နေ့မျိုးတနေ့က သူမဘဝထဲသို့ မမေ့နိုင်စရာ အမှတ်တရများစွာကို ဆောင်ကြဉ်း ပေးခဲ့သောချစ်သူ ကွယ်လွန်ခြင်းတနှစ်ပြည့် အမှတ်တရကျင်းပပွဲလေးဖြစ်သည်။ သူ၏ တော်လှန်ရေး ရဲဘော်များ စာရေးဖေါ်ရေးဖက်များ တိုက်ဖေါ်တိုက်ဖက်များနှင့် မိတ်ဆွေရောင်းရင်းများ စုဆုံပြီး အမှတ်တရ ကဗျာများ ရွတ်ဆိုနေချိန်လည်းဖြစ်သည်။ ထိုအခါ သူမရင်ထဲတွင် လွမ်းဆွတ်ခြင်း၊ တမ်းတခြင်းများနှင့် အတူ ဂုဏ်ယူကြေကွဲခြင်းများကို ယှဉ်တွဲခံစားရသည်။ ထို့ကြောင့် သူမ မိုးနှင့် အပြိုင် ငိုကြွေးနေမိခြင်းဖြစ်သည်။
သူ့အတွက် အမှတ်တရကဗျာရွတ်ဆိုသံများ သူမနားစည်မှ သည်……နှလုံးသည်းပွတ်ဆီသို့
“တိုင်းပြည်ကို ဦးမော့အောင်လုပ်ရမလား သားကိုပဲခေါင်းထောင်အောင်လုပ်ရမလား”
“ မြေဝသုန်က ဂုဏ်မပြုလည်း လူထုဆီးကြိုနေမည်သာ”… …
“လုပ်လက်စ အလုပ်တွေမဆုံးခင်”… … …
စသည့် ပဲ့တင်သံများအောက်တွင်သားနှင့်သမီးအား တင်းတင်းပွေ့ဖက်ရင်းသူနှင့် ဆုံဆည်းခဲ့ရာ အတိတ်ရပ်ဝန်းဆီသို့။
“ကိုယ့်ကိုမထားခဲ့ပါနဲ့ မင်းပြန်သွားရင် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က ကိုယ့်ကိုလှောင်ပြောင်ကြလိမ့်မယ်၊ နောက်ပြီး ကိုယ်မင်းကို မဆုံးရှုံးချင်ဘူး”ဟူသော သူ၏ သိမ်မွေ့သည့် စကားသံများက သူမ အသည်းနှလုံးကို တဘဝစာ သိမ်းကြုံး ယူငင်နိုင်ခဲ့သည်။
သူ့ထက် ငယ်ရွယ်လွန်းသော သူမကို ဘယ်တုန်းကမျှ လေသံမာမာဖြင့် မဆက်ဆံခဲ့။ မောက်မာသော အစိုးရစစ်သားများကိုသာတွေ.ကြုံခဲ့ရသော သူမပတ်ဝန်းကျင်ရှိသူများက သူ့အား နှလုံးလှသူပုန်တယောက်အဖြစ် ကင်ပွန်းတက်ကြသည်။ အလိုက်သိသော၊ အနစ်နာခံတတ်သော ကြင်နာတတ်သော၊ ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာသော ထိုထိုသော ဂုဏ်ပုဒ်များနှင့် သတင်းကြီးသူ…သူက သူမအနားတွင် ဘယ်သောအခါ အချိန်ကြာကြာမနေခဲ့။ သူ၏ တော်လှန်ရေးတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်၇န်အတွက် သူမအနားမှ မကြာခဏ ထွက်ခွာသွားတတ်မြဲ။ ထိုအခါ မျိုးတွင် သူမအား သူမမိခင်နှင့် စိတ်ချစွာအပ်နှံထားခဲ့သည်။
သူမမျှော်နေသည့် အချိန်တွင် သူရောက်မလာတတ်ဘဲ မမျှော်လင့်သော အချိန်မျိုးတွင် လွယ်အိတ်တလုံးလွယ်ပြီး ဖိနပ်သံတဖျတ်ဖျတ်ဖြင့် သူမထံရောက်လာတတ်သူဖြစ်သည်။ တနေ့ သူပြန်အရောက် “င့ါမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီ” စကားပင်မဆုံးမီ သူမအား ဗြုန်းကနဲ ထွေးပွေ့ကာ ဝမ်းသာအားရဖြင့် “ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာမိန်းမရာ ကိုယ်အဖေဖြစ်တော့မယ်” ဟုဆိုသော သူ၏ မျက်နှာသည် အပြာရောင်မိုးသားကောင်းကင်တွင် တိမ်ရိပ်တို့ကင်းစင်သကဲ့သို့ ကြည်မြ ရွှန်းလဲ့ နေခဲ့သည်။
နောက်တနေ့တွင် “အရေးတကြီး ကိစ္စရှိသေးတယ် သွားလိုက်အုံးမယ် ကျန်းမာရေးကိုလည်း ဂရုစိုက်နော် ကိုယ့်ရဲ. ရင်သွေးလေးကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် မွေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပေးပါ” လို့ပြောရင်း သူမနဖူးပြင်ကို ဖျတ်ကနဲ နမ်းရှိုက်ပြီး နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားသော သူ့ကို ငွေးမော ကြည့်နေမိသည်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ၏ ကျောပြင်ကို ကြည့်ရင်း သူ့အကြောင်းကို တွေးတောနေမိသည်။ သူမကြားနေကျစကားတခွန်းက “ကိုယ့်မှာ ညီမလေးတယောက်ရှိတယ် မင်းထက်အသက်တော့ နဲနဲပိုကြီးတယ်။ ကိုယ်ထောင်ကျနေတုန်းက ကိုယ့်ကိုထောင်ဝင်စာလာလာတွေ့တတ်တယ် ကိုယ့်ကို` လည်းသိပ်ချစ်ခင်ပြီး အလိုက်သိတတ်တဲ့ညီမလေးပေါ့”ဟု သူမကြာခဏပြောတတ်သည်။ သူ၏ မိသားစုများအကြောင်း သူမ သည်ထက်ပို၍မသိခဲ့ပေ။
သူခရီးထွက်နေချိန်များတွင်သူမမိခင်၏ တောင်ယာအလုပ်များနှင့်မွေးမြူရေးအလုပ်များကို ဝိုင်းကူရင်း သူပြန်အလာကိုစောင့်ရမြဲဖြစ်သည်။ ဗိုက်ထဲကကလေးငယ်၏ တွန်းထိုးမှုများကို ရင်ဆိုင်ရလျှင် သူမတိတ်တဆိတ် ကျေနပ်ကြည်နူးခဲ့ရသည်။ အမိုးက “ညည်းယောကျာ်းပြန်သွားတာကြာပြီနော်” တဲ့ “ဟုတ်တယ် အမိုး သူအလုပ်တွေရှုပ်နေလို့ပါ” လို့ပြန်ပြောမိသည်။ “ညည်းကဘာသိလို့လဲ” “သိတာပေါ့ အမိုးကလည်း သူတို့က ကျမတို့ နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေး ရအောင်လုပ်နေတာ”ဟု သူပြောသောစကားများဖြင့် တုန့်ပြန်မိသည်။ စူတူတူ ဖြစ်နေသော ဗိုက်ကို လက်ဖြင့်စမ်းမိရင်း သူမရင်ထဲသို့ခွန်အားတွေ ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်နေရာယူလာသည်။ င့ါရင်သွေးကို ငါပြုစုရမယ် ကျန်းမာအာင်လည်း ဂရုစိုက်ရမယ်။ ငါအားမငယ်ပါဘူး အမိုးရှိနေတာဘဲ င့ါအစ်မတွေ လည်းရှိတာဘဲ သူကတချိန်ချိန်ပြန်လာမှာပေါ့။
မျက်ဝန်းထဲတွင် သူ၏အပြုံးရိပ်ကိုမြင်ယောင်ရင်း အမိုးလက်ကို ဆုပ်ကိုင်ကာ သူမ အံကျိတ်၍ အစွမ်းကုန်အားထုတ်လိုက်တော့ “ဟယ် မွေးပြီ မွေးပြီ မိန်းကလေး” မောပန်းနွမ်း နယ်နေသည့်ကြားမှ မျက်ရည်များနှင့် သူမပြုံးမိသည်။ ရှင်းသန့်သော ညနေက လေနုအေးလေး များနှင့်အတူ ထိုသို့ သူပုန်သမီးကို ကြိုဆိုလို့နေခဲ့သည်။ အာဏာရှင်ကို တော်လှန်သူ ခင်ပွန်း သည်အတွက်မျိုးဆက်သစ်ကို မွေးဖွားပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ဇနီးကောင်းအဖြစ်နဲ.ရော မိခင်ကောင်းတဦး အဖြစ်နဲ.ပါ သူမတာဝန်တွေ ကျေချင်ပါသည်။
နောက်နေ့တွင် သူပြန်ရောက်လာသည်။ သူမဘ၀တွင် ထိုနေ.သည်အရာရာဟာ လှပခြင်းများနှင့် အတိပြည့်စုံနေခဲ့သည်။ “သမီးလေး သမီးလေး” ဟု သူအဆက်မပြတ်ခေါ်နေသည်။ သမီးအား မထိမရက်မတို့မရက်သလို သူမအနားသို.လည်း သူတော်တော်နှင့်မကပ်ခဲ့ ။ အလွန်ကျေးဇူးတင်သော မျက်ဝန်းများနှင့် တောင်းပန်တိုးလျိုးလို့နေခဲ့သည်။ သူမကလည်း “သူပုန်မယားတယောက်အနေနဲ့ ထုသားပေသားကျတဲ့ ဘဝကို ရင်ဆိုင်အံတုနိုင်ပါတယ်” ဟု တိတ်ဆိတ်စွာ သူမတို့နှစ်ယောက် မျက်ဝန်းမှ တဆင့်နားလည်မှုတွေ ဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။ သမီးဦး ကို မွေးပေးသော ချစ်ဇနီးအား သူပေးအပ်နိုင်ခဲ့သော လက်ဆောင်မွန်မှာ အနှီးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သော ပုဆိုးဟောင်း သုံးထည်သာဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုလက်ဆောင်ကို သူမမြတ်နိုးတန်ဖိုးထားစွာ လက်ခံယူခဲ့သည်။ သမီးကို သူကိုယ်တိုင်နာမည်ပေးခဲ့သည်။ အနာဂတ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကဲ့သို့ သမီးကောင်းရတနာ ဖြစ်စိမ့်သောငှာ အဆိုပါခေါင်းဆောင်၏နာမည်ပါသော “_” သမီးလေးဟု ချစ်စနိုးနာမည်ပေးခဲ့သည်။ ထိုညက သူမကြက်သီးမွေးညှင်းဖြန်းသည် အထိကြည်နူးခံစားမိစဉ် ပြူတင်းပေါက်အနီးရှိ သစ်ကိုင်းပေါ်မှ ငိုက်မျဉ်းနေသော ငှက်တအုပ်ထံမှလည်း တောင်ပံ တဖျပ်ဖျပ်ရိုက်သံများပါ ကြားလိုက်ရသည်။
သမီးကိုသိပ်ချစ်သော သူက သူမတို့သားအမိကို သူတာဝန်ကရာနေရာလေးသို့ ခေါ်ဆောင် သွားခဲ့သည်။ သူနှင့် အတူနေထိုင်ရာ အိမ်လေးသည် သူမအတွက်တော့ ချမ်းမြေ.ဘွယ်ရာ သီရိဂေဟာလေးဖြစ်ခဲ့သည်။အနေကြာလာမှ သူ၏အလုပ်တာဝန်နှင့် သူဝါသနာထုံရာများကို သူမလေ့လာ သိရှိခွင့်ရခဲ့သည်။ မျက်မှန်ကိုင်းမဲတလက်နှင့် ရေနွေးဓါတ်ဗူးဘေးမှာထားပြီး တနေကုန် တကုပ်ကုပ်နှင့်စာရေး စာဖတ်လုပ်နေသော သူ့အား သူမအံ့သြတကြီး ကြည့်နေတတ်သည်။ သမီးကိုချစ်ပေမဲ့ မချီတတ်သော၊ သားငါး မကိုင်တတ်သော၊ ဟင်းမချက်တတ်သော၊ ထမင်းပျော့မစားတတ်သော၊ ရဲဘော်ရဲဘက်များလာလျှင် ရှိတာအကုန်ကျွေးတတ်သော အမေရိကန်က၊ နအဖက၊ အန်အယ်လ်ဒီက၊ အိန္ဒိယက ၊ အာစီယံက၊ တရုတ်က.... ဟူသော သူမနားမလည်နိုင်သည့် စကားများဖြင့်ဆွေးနွေးတတ်ပြီး ရဲဘော်များအား နွေးထွေးစွာ ဧည့်ဝတ် ကျေပွန်တတ်သော သူ.ကို ရီဝေစွာငေးကြည့်နေခဲ့ဖူးသည်။ သူကျွမ်းကျင်စွာ မလုပ်တတ်သော အလုပ်များကို အတင်းလုပ်ခိုင်းလျှင် “ချစ်ဇနီးကလည်းကွာ လိမ္မာပါတယ် မင်းလုပ်လိုက် မင်းလုပ်ရင် ခဏလေးနှင့်ပြီးမှာပါ ”ဟုချော့မော့ခိုင်းတတ်သော သူ့အား သူမစိတ်မဆိုးရက်ခဲ့။“အေး အိမ်အလုပ်နဲ့ ကလေးကိစ္စတွေအားလုံး ငါ့တာဝန်ထား” ဟု ဒေါသမပါသော အသံမာမာဖြင့် သူမ ဟန်ဆောင်တုန့်ပြန်ခဲ့ဖူးသည်။ တခုသောရာသီတွင် သူသိပ်ချစ်သည့်သူ့ညီမလေး ရောက်လာခဲ့သည်။ မောင်နှမနှစ်ယောက် စကားများပြောမကုန်ဖြစ်နေသည်ကိုကြည့်ရင်း သူမကြည်နူးခဲ့ရသည်။ သူ၏ အပျော်မျက်နှာကို သူမမနေ့နိုင်ခဲ့။
ထိုနေရာလေးမှတဆင့် သူတို့မိသားစု(သူမနားမလည်နိုင်သော) နိုင်ငံရေး စစ်ရေးအခြေအနေ များကြောင့် နယ်စပ်စခန်းကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရသည်။ ဖခင်ကို သိပ်ခင်တွယ်လွန်းသောသမီးနှင့် သမီးအားသိပ်ချစ်သော ဖခင်အကြား သံယောဇဉ်တွေကိုနားလည်စွာဖြင့် မိခင်နှင့် ဆွေမျိုးကို နှုတ်မဆက်ပဲ သူခေါ်ဆောင်ရာကို သူမလိုက်ပါခဲ့သည်။ တောင်တန်းများ၊ သစ်ပင်ကြီးငယ်များ ဝိုင်းရံထားသော စိမ်းညို့ညို့စခန်းလေးသည် သူမအတွက် ကမ္ဘာသစ် ထပ်မံဖြစ်ခဲ့ရပြန်သည်။ ထိုအချိန်တွင်သူ၏အလုပ်မှာ အစည်းအဝေးတက်၊ မိုးလင်းမှ မိုးချုပ်သတင်းနားထောင် ၊ စာဖတ်၊ စာရေးဖြစ်သည်။ သူမမှာ အိမ်အလုပ်များနှင့်တောင်ယာငရုပ်ခင်း၊ စားစရာသီးနှံပင်များကို ဒိုင်ခံတာဝန်ယူလုပ်ရသည့်အခါ တခါတရံပင်ပန်းလွန်း၍ ကူညီမပေးတတ်သော သူ.ကို ခပ်ချဉ်ချဉ်ဖြင့် မျက်စောင်းထိုးလျှင် “ချစ်ဇနီးကလဲကွာ ကို့ကို အဲ့ဒီလို ဂုဏ်မပြုပါနဲ့” ဟု ကျီစယ်တတ်သည်။ မောပန်းလွန်း၍ ထွက်ချင်နေသော ဒေါသများက သူ့ဟာသများကြားတွင် ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက် ပျောက်ကုန်တတ်သည်။ မာရေကျောရေနိုင်လှသော သူမအား သူကထိုသို့ ချစ်စနိုးဖြင့် ကျီစယ်ကာ သူမစိတ်ကို နူးညံ့စေတတ်ပြန်သည်။ ဟာသဥာဏ်ရွှင်သောသူက သူမဘဝထဲ သို့ အဘယ်သို့သော ဝမ်းနည်းမှုမျိုးကိုမှ သယ်ဆောင်မပေးခဲ့။ သူ၏နိင်ငံရေးလုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်များလာလျှင် “ဒါကျနော့်ဇနီး” ဟု အမြဲဂုဏ်ယူ မိတ်ဆက်ပေးလေ့ရှိသည်။ ထိုအခါမျိုးတွင်သူမ ရှက်ဝဲဝဲဖြစ်တတ်စမြဲ။
တောင်ယာစိုက်ခင်းလေးနှင့်မိသားစု နေသားကျနေသော ဘဝမှ တဖန်သူပုန်တို.၏ ထုံးအတိုင်း နေရာသစ်ဖြစ်ရာ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ဒုက္ခသည်စခန်းသို့ ထပ်မံရွှေ့ရပြန်သည်။ ထိုစခန်းတွင် ငှက်ပျောပင်များပါသော ခြံဝန်းသေးသေးလေးကို သူမတို့မိသားစု ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့သည်။ ငှင်ပျောပင်မတူးတတ်သော သားခွဲမစိုက်တတ်သော သူ၏အရည်အချင်းများကို သူမသိရှိရပြန်သည် ။
သူမအားကူညီလုပ်ကိုင်ပေးချင်သော်လည်း ပေါက်တူးကိုင်ပြီး ငိုင်နေတတ်သော သူ့ထံမှ ပေါက်တူးကို သူမကပင် လွှဲပြောင်းယူရစမြဲ။ အဆိုပါကဗျာဆရာ လက်နက်ကိုင်ရဲဘော်၏ နူးညံ့နွေးထွေးသော လက်အစုံကို သူမရင်ခုန်စွာဆုပ်ကိုင်ခဲ့သည့်အကြိမ်များ မရေတွက်နိုင်ခဲ့။ သူသည် သူမတို့ သားအမိအား တိတ်ဆိတ်သောအိမ်လေး၌မကြာခဏ ခွဲခွါထားရစ်ခဲ့သည်။ သူမရှိသော အချိန်များတွင် သမီးလေး၏ “ပါပါး” ဟုယောင်ရမ်းခေါ်သံကြားလျှင် သူမတိတ်တဆိတ်မျက်ရည်ကျရသည်။“အမေ တို့သားအမိလို မိသားစုတွေ မြန်မာပြည်အနှံ့အပြားမှာ ရှိနေတယ်သမီးရဲ့ အချိန်တန်တော့လည်း သမီးပါပါးပြန်လာမှာပေါ့”ဟုတီးတိုးရွတ်ဆိုနေခဲ့ဖူးသည်။
သမီး အသက် ငါးနှစ်ကျော်လောက်တွင် သူမတို့မိသားစုအတွင်းသို. ထပ်မံဝင်ရောက်လာသူမှာ သားငယ်လေးဖြစ်သည်။ မိသားစုအားလုံး၏ ပီတိမျက်နှာများသည် မည်သည့်အရာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြလို. ရမည်မဟုတ်ချေ။ သားလေးအား နာမည်ပေးခဲ့သူမှာလည်း သူသာဖြစ်သည်။ သူ့နာမည်နှင် သားလေးအဖိုး၏နာမည်ပါအောင်မှည့်ခဲ့သည်။ သူမကတော့ သူ၏ပီတိအပြုံး များကိုကြည့်ရင်း အားရှိနေရသူသာ။ သားမွေးပြီးနောက်ပိုင်း သူ၏ခံစားချက်များကို စာများ အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းမှာ “ကျောင်းသားက သူပုန်ဖြစ် သူပုန်က ဖခင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ တိုက်ပွဲ တပွဲပါသား” ဟုဆောင်းပါးတပုဒ်အားပါးတရ သူရေးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမမှာတော့ ပီတိအပြုံးများဖြင့် သူ့ဆောင်းပါးကို ဖတ်ဖြစ်ခဲ့သူသာ….။
သားလေးသည် ၃လသားအရွယ်တွင် ကျန်းမာရေးစတင်ချို့တဲ့လာခဲ့သည်။ ဆေးစစ်ချက်အရ ထွက်လာသောအဖြေက သူမတို့မိသား မိသားစုကမ္ဘာကို ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ သားလေးနေမကောင်းဖြစ်ချိန် ညတာရှည်များကို သူမတစ်ယောက်တည်း အထီး ကျန်စွာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ထို့ပြင် ကျန်းမာရေးမကောင်းသော နာတာရှည်သားလေးကတဖက် ကျောင်းတက်နေသော သမီးလေးကတဖက်နှင့် မိသားစုအတွက် ဝင်ငွေရရှိရန် သူမဝက်မွေးမြူရေးကို တနိုင်တပိုင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သားနှင့်သမီးအတွက် သူမသည်သာ ဆရာဝန် သူမသည်သာ ကျောင်းဆ၇ာ သူမသည်သာမိခင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ သူကမိသားစုအပြင် သူချစ်သော မြန်မာ ပြည်ူလူထုအတွက် တိုက်ပွဲများ တခုပြီးတခုရင်ဆိုင်တိုက်နေချိန် သူမသည် လည်း နောက်တန်းရှိ သူမမိသားစုအတွက် ဘ၀ဆိုသည့်တိုက်ပွဲအား မီးကုန်ယမ်းကုန်း ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ဖြစ်သည် ။ထိုဘဝတိုက်ပွဲအား သူမသတ်တိရှိရှိဖြင့် ဆက်လက်ရင်ဆိုင်ခဲ့သည်။
သူမချစ်သောသူကတော့ပြန်ရောက်လာလျှင် “အားတင်းထားပါ မိန်းမရာ သားလေးကို ကျန်းမာလာအောင် ကိုယ်တို့ကြိုးစားရမှာပေ့ါ ဘဝဆိုတာဒီလိုပါပဲ။တခါတရံ ကိုယ်ဖြစ် ချင်တာတွေ ဖြစ်မလာတတ်သလို ကိုယ်မဖြစ်တာတွေလည်းဖြစ်လာတတ်တယ်” ဟုနှစ်သိမ့်တတ်သည်။ သူမရင်ထဲတွင် အတ္တကြီးသောမိန်းမဟုအပြစ်တင်လျှင် ကျေနပ်စွာခံယူလိုက်မည်။ သားလေးကျန်းမာရေး ကောင်းလာရန်အတွက် သူတသက်လုံးယုံကြည်ရာတွေကို လှေကားထစ်ပမာ အသုံးပြုရန် (တတိယနိုင်ငံသို့ထွက်သွားရန်) တိုက်တွန်းခဲ့ဖူးသည် ။ထိုကာလမှစ၍ သူမတို့နှစ်ဦးစား အတ္တလွန်ဆွဲပွဲတွေ ကျင်းပရပါတော့သည်။ လမိုက်ညများစွာ အခန်းကျဉ်းလေးထဲတွင် ကျောချင်းကပ်အိပ်လျှက် သက်ပြင်းမောကိုပြိုင်တူချရင်း သူမတို့နှစ်ယောက် မိုင်ပေါင်းမျာစွာ ဝေးကွာခဲ့ဖူးသည်။
နောက်ဆုံးတော့ တိုက်ပွဲဝင်ကျွမ်းကျင်လှသော သူ့ကို သူမက အနိုင်ပေးလိုက်ရသည်။ သားလေးအား ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ပင် ဆေးကုရန် သူ၏မပြီးဆုံးသေးသော တော်လှန်ရေးကို ဆက်လုပ်ရန်.. သားအတွက် မိခင်၏သောကနှင့် အတ္တများကို သူမဖာသာကျိတ်မှိတ် ဝါးမျိုချခဲ့ရသည်။ မိန်းမတယောက်ရဲ့ အားမာန်တွေကိုအစွမ်းကုန်လှစ်ပြရင်း သူမသည် သူချစ်သော တော်လှန်ေ၇း ခရီးတွင် အုပ်တချပ်သဲတပွင့်အဖြစ် ပါဝင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့သည်။ ထိုသို့ တော်လှန်မြေတွင် သူမတို့နှစ်ဦး တာဝန်ကိုယ်စီနှင့် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြရာမှ… …။
“အမြန်လာခဲ့ပါ သူ့ကို ဆေးရုံတင်ထားရတယ်” ဟူသောအကြောင်းကြားစာရောက်လာသည်။ ထိုစဉ်က နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် သူရှိရာကိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သူမမသိခဲ့ပေ။ သားလေးအားတင်းကြပ်စွာထွေးပွေ့ရင်း လေထဲတွင် လမ်းလျှောက်နေသူပမာ သူရှိရာသို့ရောက်သွားခဲ့သည်။ ဆေးရုံပေါ်တွင်ပိုက်တွေ နှင့် ရှုတ်ယှက်ခတ်နေသည့်ကြားမှ သူမချစ်သူ သူပုန်ကဗျာ ဆရာ၏ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောလက်များကို နောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဆုပ်ကိုင်ထားရင်း သူမတိတ်တဆိတ်မျက်ရည်ကျနေခဲ့သည်။ “ကိုပြန်လာခဲ့မယ်နော်” ဟုအကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့သော သူက သူမတို့သားအမိတတွေကို နှုတ်မဆက်ပဲ ထွက်သွားတော့မှာလား။ သူမနှုတ်မှလည်း “ရှင်ရဲ့ ခွန်အားတွေ သတ္တိတွေ ယုံကြည်မှုတွေကို ကျေးဇူးပြုပြီး ကျမဆီလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါ”သို့သော် သူကတော့ သူမကို ထားရစ်ခဲ့တော့သည် ။ ထိုနေ့ ဇွန်လ ဆယ့်ခြောက်ရက် သူမဘဝသည် အိုးထိမ်းစက်ပမာ သွက်သွက်လည်ခဲ့ရသည့်နေ့ပင်ဖြစ်သည်။ “ကြီးမြတ်သူရဲ့ ဈာပနမှာအလွမ်းတွေချွေနေတဲ့ ဒေါ်ကူးရေ ခေတ်ကြီးကိုယ်၌ကလည်း သူ့ကိုရှုံးခဲ့ရပါတယ်ဗျာ ကြည့်ပါလား၊ မိုးတွေရွာနေတာပဲ၊ အဲဒါခေတ်ကြီးကသူအတွက် ငိုနေတာပေါ့” တဲ့….။
ထိုကဗျာရွတ်ဆိုသံက သူမအား ပစ္စုပန်သို့ ပြန်လည်ဆွဲခေါ်လာခဲ့သည်။ မပြီးဆုံးသေးသော ချစ်သူ၏ ယုံကြည်မှုများအတွက် တာဝန်များကို လက်ဆင့်ကမ်းထမ်းဆောင်နိုင်ရန် သူချစ်သော သားသမီးများနှင့် အတူဟောဒီကမ္ဘာကြီးမှာ သူမဆက်လက်ရှင်သန်နေရအုံးမှာပါ။
(ရဲရင့်တည်ကြည်သော သူပုန်မယားဖြစ်သူ သူငယ်ချင်း ဒေါ်ကူးအတွက် အမှတ်တရ)၃၁၊ဇူလိုင်၊၂၀၀၆
Posted by daw nwe at 9:10 PM No comments:
အလွန်မြင့်မားပြီး မဲမှောင်ထူထဲလှသည့် စက်ရုံ၏ အုတ်တံတိုင်းနံရံများကို စိတ်မှန်းနှင့် ကျော်လွန်ကာ ကြည့်မိသည်။ ထိုအခါလရောင်အောက်တွင် အေးစက်အုံ့စိုင်းနေမည့် ကုက္ကိုပင်ကြီးများနှင့် ရှု့မျှော်မဆုံးဖြစ်နေမည့် ရွှေဝါရောင်စပါးခင်းများကို မြင်ယောင်လာသည်။ အဆောင်တံခါးပေါက်လေးမှ ကြည်လဲ့ရွှန်းမြစွာသာနေမည့် လမင်းကြီးကို မမြင်ရပေမယ့် တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ လောကကြီးကို အေးအေး ချမ်းချမ်း ငုံ့မိုးကြည့်နေမည့် လမင်းကြီးကတော့ ကောင်းကင်ပြင်ရဲ့တနေရာ ထိန်ထိန်ညီးနေမှာပါ။ လူနှစ်ထောင်လောက် ဆံ့သည့်သည်စက်ရုံကြီးရဲ့ ဘေးပတ်ပတ်လည်မှ လယ်ကွင်းပြင်များ၊ သစ်ပင်ကြီးငယ်များ ၀ိုင်းရံထားသည်။ ဒီအချိန်များ စက်ရုံအပြင်ဘက်က ၀န်းကျင်ကို ကြည့်ရှု့ခွင့်များ ရခဲ့လျှင် ဘယ်လောက်တောင် လောကကြီးက သာယာနေလိမ့်မလဲ။ အင်း…စိတ္တဇညချမ်း ပန်းချီကား တချပ်လို အသက်ဝင်နေမည်မှာ အသေအချာပေါ့။ တကယ်ဆိုကြာခဲ့ပြီပဲ။ ဒီလိုညချမ်းအေးအေးမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကစားခဲ့ရတဲ့ ငယ်ဘ၀တွေက ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်ခြင်းမလှပျောက်ခဲ့တာ အတော်ပင်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ တိတ်ဆိတ်နေသည့် ညချမ်းတွင် အိပ်မပျော်သောလဲ့ အတွေး နယ်ချဲ့နေမိသည်။ ကိုယ့်ဘေးပတ်လည် အမှောင်ထဲတွင် အတုံးအရုံး အိပ်မောကျနေသော သူငယ်ချင်းများကို အားကျစိတ်ဖြင့် ငေးနေမိသည်။
ထိုစဉ် ‘ငါ့ချည်လုံးဘာလို့ ယူသွားတာလဲ…ပြန်ပေးလေ၊ လုပ်နေတာမမြင်ဘူးလား’ အော်သံကြားရတော့ သူမအမှောင်ထဲတွင် မချိပြုံး ပြုံးမိသည်။ ဘ၀တူ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဘ၀အမောတွေက အိပ်ရာထဲတွင် ယောင်အော်နေရလောက်အောင် အေးစက်ခါးသီးနေခဲ့သည်။ လဲ့လဲ့နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဘ၀ညတာတွေက အလွန်ပင်ရှည်လျားမောပန်းဖွယ်ရာ ဖြစ်သည်။ ဟောဒီဆောင်းညတွေမှာဆို ညတာကပိုလို့ပင် ရှည်လျားနေတတ်သည်။
တကယ်တမ်းဆိုလျှင် လဲ့တယောက် သဘာဝကျကျလှပသည့် တောတောင်ရေမြေများနှင့် ဝေးကွာ နေခဲ့သည်မှာ အချိန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ တောပန်းတောင်ပန်းများနှင့် လယ်ကွင်းပြင်ပေါများသော အမိမြေလောက် သူမဘ၀ကို ပျော်ရွှင်မှုတွေဖန်တီးပေးနိုင်သည့်နေရာ မည့်သည့်နေရာမှ ရှိမည်မထင်ပေ။ သက်ပြင်းရှည်တခုကို ချမိသည်။ သူမ ဒီနေရာတွင် နေရသည်ကို နည်းနည်းမှ မပျော်မွှေ့ခဲပါဘူး။ တခါတရံ အထုပ်အပိုးကိုဆွဲပြီး အမိမြန်မာပြည်ကို ချက်ချင်းပင် ထပြန်ချင်စိတ်များဖြစ်မိသည်။ မကြာခဏ အဲဒီလိုစိတ်မျိုးပေါ်ခဲ့ပေမယ့် လက်တွေ့တွင် သူမဘယ်တုန်းကမှ အကောင်အထည်မဖော်ဖြစ်ခဲ့ပေ။
ထောင်နံရံများနှင့်တူသည် သည်စက်ရုံထဲကို ရောက်နေသည်မှာ ၃ နှစ်ပင်ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ထိုသုံးနှစ်အတွင်း သူမ၏ ဇာတိရွာလေးသို့ တခေါက်မှပင် မပြန်ဖြစ်ခဲ့ပေ။ မိန်းကလေးငယ်များအတွက် သားရဲတွင်းနှင့်တူသည့် သည်နိုင်ငံတွင် သူမ နေထိုင်ရသည်ကို နည်းနည်းလေးမှ မပျော်ပိုက်ပါ။ ရုပ်ရည်လေး သနားကမားနှင့် သူမကို သူငယ်ချင်းတွေက အဖွားလေးဟု ကျီစယ်ကြသည်။ တကယ်တော့ သူမ အစိုးရိမ်လွန်နေခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ မိန်းကလေးများ ဂိတ်ပေါက်က ထွက်တိုင်း ဟိုထိ သည်ထိနှင့် တို့ကနန်း ဆိတ်ကနန်းလုပ်တတ်သော ဂိတ်စောင့်များ၊ ဟိုပုတ် ဒီပုတ်လုပ်ချင်ကြသော လိုင်းဆရာအစ စက်ပြင်ဆရာအဆုံး စသော ပုရိဿများကို သူမဘ၀တွင် ထပ်မံကြံတွေ့ရပြန်တော့ ဘယ်ယောက်ျားသားများကို မဆက်ဆံဝံ့တော့ပေ။ ယောက်ျားမုန်းဝါဒီ မဟုတ်ပေမယ့် သူမ ဘယ်ယောက်ျားကိုမှ မယုံကြည်ဝံ့။ သူ့ဘ၀တွင် အလှအပထက် မိန်းမတယောက်တွင် အရှိသင့်ဆုံး အဖြစ်သင့်ဆုံးအရာက စိတ်ဓါတ်ကောင်းဖို့ဖြစ်သည်ဟု သူငယ်ချင်းများကို သူမအမြဲပြောခဲ့သည်။ အသားအရေ ဖြူစင်ဝင်းဝါနေသော သူမအား ပို၍လှပသွားစေရန် သူမကို ၀ိုင်းဝန်းပြင်ဆင်ပေးကြသည်ကို သူမဘယ်တုန်းကမှ လက်မခံခဲ့ပေ။ သူမ မပြင်တတ်လို့မှမဟုတ်ပဲ။ အလှအပတွေကို စိတ်ကုန်လွန်းလို့ ပြင်ဆင်ရမှာကို ကြောက်လွန်းလို့ပင်ဖြစ်သည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံမှ မိန်းမဆိုတာ လှဖို့လိုတယ်၊ ပညာမတတ် ပိုက်ဆံမချမ်းသာရင် ပိုပြီးတောင်လှဖို့လိုတယ်ဟု ပြောသံကြားရတိုင်း အလှအပကိုဗန်းပြပြီး ၀မ်းစာရှာခဲ့ရတဲ့ သူမစိတ်မလုံမခြုံဖြစ်ခဲ့ရသလို ဒီလို သူမ ချစ်တဲ့လသာညတွေရောက်တိုင်း အတွေးအိမ်မှာ နေရာယူတတ်သည့် ညတစ္ဆေတွေက သူမကို ခြောက်လှန့်တတ်မြဲဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ်လောက်က ဖိုးလမင်းကြီးက ယနေ့တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နေသလို တာဝန်ကျေခဲ့ပါသည်။ ဖိုးလမင်းကြီးက သာမြဲသာနိုင်ခဲ့ပေမယ့် သူမဘ၀ကတော့ မသာတလှည့် သာတလှည့်ဟုပင် တင်စားရမည်ထင်သည်။ အဲဒီအချိန်မှက ဒီလိုညချမ်းအေးအေးမှာ နမ့်ပိန်းချောင်း ရေအလျှင်က လှပသည့်သံစဉ်ကိုဖန်တီးရင်း ညင်သာစွာရွေ့လျားလို့နေသည်။ ချောင်းထဲတွင် ကျောက်တုံးကျောက်ခဲများက ဟိုတစုသည်တစုနှင့် အုပ်စုဖွဲ့သူဖွဲ့ တကိုယ်တည်းရပ်သူရပ်ဖြင့် ငြိမ်သက် တိတ်ဆိတ်လို့နေသည်။ ရံဖန်ရန်ခါ မိုးရာသီများတွင် သူတို့ခမျာ အငြိုး တကြီးနှင့်လှိမ့်ဆင်းလာသော ရေအလျင်ဟူသမျှကို ရင်ကော့ကာ အံကြိတ်ခံနေရသည်။ တခါတရံ ကြည်နှုးလွမ်းဆွတ်ဖွယ်ရာ၊ တခါတရံဆိုလျှင် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော ထိုရေအလျင်၏ သံစဉ်များက သူမဘ၀လေးကို တစစီ ယူငင်ခေါ်ဆောင်သွားဟန် အထင်သားဖြစ်သည်။ ချောင်းကမ်းပါးရှိ သဘာဝရှု့ခင်းများကလည်း သာယာစိမ်းလို့နေသည်။ ထိုလှပသော ၀န်းကျင်၏ ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင် သူမ ချစ်သောညများအား ရွံမုန်းစိုးရွံ့မှုများကို ဖန်းတီးပေးထားသော အဆောက်အဦးတခုရှိသည်။ အနောက်တိုင်း သံစဉ်များနှင့် ဖုံးလွမ်းနေသော သူမ၏ညများ၊ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် မီးရောင်အောက်တွင် ခါးသီး အကျည်းတန်လွန်းလှသော ညများစွာကို မမလက်များကို တင်းကြပ်စွာ ဆုပ်ကိုင်ရင်း သူမအံကြိတ်ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရသည်။
ထိုနေရာသည် ပယင်းရောင်များ၏ တန်ခိုးဖြင့် မှုးရစ်ရည်ဝေနေသော မဟာပုရိဿများကို မျက်စိပသာဒဖြစ်အောင် ဖျော်ဖြေပေးရသော သူမနှင့် ချစ်သောမမ၏ လုံခြုံမှုမဲ့စွာ ဖြတ်သန်း ရသောဘ၀များ၊ ကံကြမ္မာ၏ စေစားချက်အရ ‘လမုန်းမယ်’ ဟုခေါ်သော ဘားအကမယ်အဖြစ် သူမနှင့်မမ ဘ၀ကို ရုန်းကန်လှုပ်ရှားခဲ့ရသည်။ လာရောက်စားသုံးသူများ စိတ်ကျေနပ်မှုရစေရန် သူဌေးအလိုကျ မိမိကိုယ်ခန္ဓာကို လှပစွာဆင်မြန်းရသည်။ စကပ်တိုတို ပေါင်ဖြူဖြူလေးများဖြင့် ကပြဖျော်ဖြေရသော လမုန်းမယ်အလုပ်ကို သမာအာဇီဝအလုပ်ဟု ရိုးသားစွာယုံကြည်မိသည်။ သို့သော် ထိုသို့ သမာအာဇီဝ အလုပ်များကိုဖြင့် ရိုးသားစွာ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေသော ဘ၀တူအမျိုးသမီးများအားလှောင်ပြောင်သရော်၍ ဆက်ဆံသူများကို ရွံမုန်းစွာ ဆက်ဆံရသည်။ အသက် ၁၃ နှစ်နှင့် ၁၅ နှစ်အရွယ်သူမတို့ ညီအစ်မက တခုလပ်အမေကို လုပ်ကျွေးပြုစုခဲ့ရသည်။ ဘားသိမ်းချိန် ည ၂ နာရီအထိ စိတ်လက်ချစွာ အိပ်မပျော်နိုင်သော အမေက သူတို့ညီအစ်မပြန်လာချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းနေလေ့ရှိသည်။ ညမှောင်မှောင်တွင် အိမ်ရှေ့ရောက်လာသော သမီးနှစ်ယောက်ကိုတွေ့မှ အမေသည် သက်ပြင်းမောကိုချရင်း ညတာ ရှည်များကို ဆက်လက်ရင်ဆိုင်လေ့ရှိသည်။
တကယ်တော့ သူမတို့ညီအစ်က အမေ့အား စိတ်ချလက်ချအပ်မောကျနေသည်ကိုသာ မြင်လိုလှသည်။ သို့ပေမယ့် အမေတွင် အိပ်မောကျသည်ညဟုမရှိ ကြက်အိပ်ကြက်နိုးဆိုသလို သက်ပြင်းမောများဖြင့် မိုးလင်းခဲ့သောညများ နည်းမည်မထင်ပေ။
အမေသည် အဖေနှင့် မကွဲခင်ကပင် ဘ၀အမောများနှင့်သာ လုံးချာလည်ခဲ့သည်များကို မိုးပျင်းမြို့လေးရောက်မှ သိခဲ့ရသည်။ မချစ်မနှစ်သက်သော ခင်ပွန်းနှင့် ကလေးသုံးယောက်ရသည်အထိ ပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့သည်။ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ချမ်းသာသော အဖေသည် အမေ့ကွယ်ရာတွင် ဖောက်ပြန်နေလေ့ရှိသည်။ အမေ့အား လိုချင်လွန်းလှသည်ဟို ဆိုသဖြင့် အမေ့အသိုင်းအ၀ိုင်းက အမေ့အား အခန်းပိတ်ကာ ချောင်ပိတ်ယူစေခဲ့သည်။ မြန်မာ့ယာဉ်ကျေးမှုအရ မချစ်မနှစ်သက်သော်လည်း ယောက်ျားတယောက်နှင့် တခန်းတည်းတွင် အတူနေမိခြင်းသည် မြန်မာအမျိုးသမီးများအတွက် တသက်စာ ထောင်ချောက်ကို နင်းမိသည်နှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ အမေငြင်းပယ်နေသည့်ကြားမှပင် မိဘဆွေမျိုးများ၏ ညည်းအပျိုပြန်ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူးဟူသော ထောပနာသံများကြားမှ ငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ်နှင့်ပင် အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ရသည်။ လူပျိူဘ၀ကပင် မိန်းမရှုပ်ပေသောအဖေက သားသမီးများ ရရှိသော်လည်း ခြေမငြိမ်ခဲ့ပေ။ မိသားစုကို ငဲ့ညှာရမှန်း၊ ထောက်ထားရမှန်းမသိ။ အဖေ့မိဘ (အဖိုးနှင့်အဖွား)လည်း အဖေ့စိတ်နှင့်ပင် လုံးပါးပါးခဲ့ကြရသည်။ မိသားစုအပေါ် တာဝန်မဲ့လွန်းလှသော အဖေ့အား လွန်စွာစိတ်ပျက်နေမည်ဖြစ်သော အမေ့ကိုအသနားပိုမိပေမယ့် ငယ်ရွယ်လွန်းသော သူမတို့တတွေလည်း ဘာမှမတတ်သာခဲ့ပေ။ နောက်ဆုံးတော့ အဖေနောက်မိန်း၁ယောက် အိမ်ပေါ်သို့ခေါ်လာချိန်တွင် အမေသည် လဲတို့ညီအစ်မကို လက်ဆွဲပြီး သူ့မိတ်ဆွေများရှိရာ မိုင်းပျင်းမြို့လေးကို ထွက်ခွာလာခဲ့သည်။ အမေသည် သူအလွန်ချစ်သော သားကြီးကိုပင် အဖေနှင့် ထားပစ်ခဲ့သည်။
မိုင်းပျင်းမြို့လေးတွင် သူမတို့ညီအစ်မ နိုက်လပ်တခုတွင်လမုန်းမယ် (ဘားအကမယ်) ဘ၀ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုခဲ့ရသည်။ မမက လဲ့လောက် ချောမောလှပခြင်း မရှိပေမယ့် သူလုပ်သင့်သည် ထင်သော အလုပ်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲနှင့် ကြိုးစားလုပ်ကိုင်တတ်သူဖြစ်သည်။ သူမကတော့ ငယ်ရွယ်သူပီပီ အစ်မ အားကိုးနှင့် လှုပ်ရှားရန်းကန်နေသူဖြစ်သည်။ သူမတို့သားအမိတွေ ၀မ်းဝအောင်နှင့် ခါးလှရန်အတွက် သားအမိသုံးယောက်စလုံး ရုန်းကန်လှုပ်ရှားခဲ့ရသည်။ တခုလပ်အမေနှင့် အပျိုပေါက်သမီးနှစ်ယောက် နေထိုင်သော အိမ်လေးသည် မည်သို့မှ လုံခြုံမှုရှိမနေခဲ့ပေ။ သစ်စက်ဝန်းရှိ အလုပ်သများကို အချက် အပြုတ်တာဝန်ယူကာ လုပ်ကိုင်နေသော အမေ့ကျေးဇူးကြောင့် ထိုဝန်းထဲတွင်ပင် နေစရာ အိမ်လေးတလုံးရခဲ့သည်။ ဘ၀တူအချင်းချင်းမို့ ရိုင်းပင်သူများ ရှိခဲ့သော်လည်း လူတကိုယ်စိတ်တမျိုးမို့ သူမတို့ သားအမိသုံးယောက်ဘ၀ကို လုံခြုံမှုမဲ့စွာ ဖြတ်သန်းကျော်လွှားခဲ့ရသည်။ တခါက သူမတို့ အိပ်ပျော်နေစဉ် ညဉ့်သန်းခေါင်းကျော်တွင် လူတယောက် အပေါက်မှနေ၍ ခြေထောက်ကို လာနှိုက်သဖြင့် လန့်ဖျတ်အော်ကာ သားအမိသုံးယောက် နေစရာပင် မရှိခဲ့ဖြစ်သည်။ ပြေးစရာမြေ မရှိတဲ့ဘ၀မှာ ဒီနေရာလေးကိုပဲ သူမတို့ သားအမိတွေ အလန့်တကြား ကုတ်ကတ်ဖက်တွယ်နေခဲ့ရသည်။
သူမတို့ရှိရာ မြို့လေးသို့ မရအရစုံစမ်းကာ အကိုလိုက်လာသည်။ အိမ်ထောင်ရေးပြဿများကြားတွင် ကြီပြင်းခဲ့ရသော ပညမတတ်သည့် အစ်ကိုလည်း သစ်စက်အလုပ်သမားပဲ ဖြစ်ရသည်။ အစ်ကို ရောက်လာတော့မှပင် အမေ မိုးလင်းပေါက်ခေါင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ အစ်ကို ရောက်လာပြီး ၃ လကြာတော့ အေးချမ်းပြီထင်သော သူမတို့ဘ၀များ မုန်တိုင်းထန်ခဲ့ပြန်သည်။ ညဉ့်သန်းခေါင်တွင် ရန်သူများ ပိုများလာသည်။ ညီမများကို အကာအကွယ်ပြုလိုသော အကိုသည် စိတ်ဓာတ်များ ပိုမို ခက်ထန်လာသည်။ ထိုဘားသို့မလာရန် ပြောသော်လည်း လက်မခံခဲ့ပေ။ တနေ့တွင် ထိုဆိုင်တွင် လှပစွာ အသုံးတော် ခံကပြနေသော သူမတို့ ညီအစ်မအား ကလိချင်သော ပုရိဿများက သူတို့ကခိုင်းသောအကကို ကောင်းကောင်းမကရကောင်းလားဟုဆိုကာ ပေါင်လည်လောက်ရှိသော အစ်မ၏ စကဒ်ကို ဆွဲလှန်လိုက်သည်။ အစ်မ၏ ရှက်ဒေါသလည်း ငယ်ထိပ်ရောက်ကာ ထိုလူအား ပါးရိုက်ကာတုန့်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုပင် ဒေါသထွက်ကာ ရှက်ရမ်းရမ်းသော လူမှ အစ်မအား ပြန်လည်ရိုက်နှက်ရင်း ရန်ပွဲပြင်းထန်လာခဲ့သည်။ ထိုစဉ် ဘယ်အချိန်က ရောက်လာမှန်းမသိသော အစ်ကိုမှ ကမှုးရှုးထိုးနှင့် ၀င်လာကာ ထိုသူအား မည့်သည့်အရာနှင့် ရိုက်နှက်လိုက်သည် မသိပေမယ့် နေရာတွင်ပင် ခွေခေါက် သွားသည်။ ကံဆိုးလွန်းတော့ အစ်ကိုသစ်စက်ဝန်းမှကောက်လာသော သစ်တွင်သံပါနေသဖြင့် နောက်နေ့ဆေးရုံတွင် ထိုလူဆုံးသွားသည်။ အစ်ကိုလည်း ထိုအမှုနှင့်ပင် နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် ကျခဲ့သည်။ အမေနှင့်အစ်မလည်း ဇာတိဖြစ်ရာ မြေပြန့်ရွာလေးသို့ ပြန်သွားသည်။ သူမတော့ ဖောက်ပြနသော အဖေ့မျက်နှာကိုလည်း မကြည့်လို၊ ငွေရှိမှ လူထင်တတ်သော အသိုင်းအ၀ိုင်းကိုလည်း ရင်မဆိုင်မလိုသဖြင့် မိုင်းပျင်းမှတဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ထွက်လာဖြစ်သည်။ သူမငွေရှာမှဖြစ်မည်၊ သူမဘ၀တွင် အမေ့အား လုပ်ကျွေးရမည်ဆိုသည့်အသိမှတပါး အခြားမည်သည့်အတွေးများမှ ခေါင်းထဲတွင်ရှိမနေပေ။ အသက် နှစ်ဆယ် မပြည့်တတ်သေးသော သူမဘ၀ ဒဏ်တွေကိုခါးခါးသီးသီး ရင်စည်းခံခဲ့ရသဖြင့် နောက်တခါ အနာမခံလို အလှအပပြင်ပြီး လုပ်ရမည့်အလုပ်များ သူမလျှာတွင် မြက်ပေါက်နေပါစေ ဘယ်တော့မှ လုပ်ဖြစ်မည်မဟုတ်တော့ပေ။ ဒါကြောင့်ပင် အလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရင်း သူမဘ၀လေးကို အကျဉ်း ထောင်နှင့် တူသော ဒီစက်ရုံဝန်းထဲတွင် မြုပ်နှံထားသည်မှာ ကြာပါပြီကောလား။ အိပ်ပျော်နေသော သူငယ်ချင်း ထထိုင်လိုက်မှ သူမဆက်ကနဲဖြစ်ကာ အတွေးစများလည်း ပြတ်တောက်သွားသည်။
‘မအိပ်သေးဘူးလား…ငါတောင်တရေးနိုးလာပြီ၊ အိပ်တော့လေ။ မနက်အလုပ်ဆင်း ရဦးမယ်….တော်ကြာမနိုးပဲနေဦးမယ်’။ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူပြောသော စကားများကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်းမပြုပဲ သူမအိပ်ယာပေါ်သို့ အသာလှဲချလိုက်သည်။ မျက်စိကိုအမှိတ် မျက်ဝန်းထဲတွင် မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်နှင့် ရောင်စုံမီးရောင်များကို မြင်ယောက်လာသည်။ သူမလက်သီးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်၊ အံကိုကြိတ်ရင်း ‘မဖြစ်ဘူး ဒီအနိဌာရုံမြင်ကွင်းတွေကို ဘ၀မှာ မေ့နိုင်အောင် ငါကြိုးစားရမယ်’ အသံမထွက်ပဲ ရေရွတ်လိုက်မိသည်။ ‘မလာပါနဲ့…မလာခဲ့ပါနဲ့ အိပ်မက်ထဲတောင်မလာပါနဲ့’ ဟု သူမအကြောက် အကန်ငြင်းဆန်နေမိတော့သည်။
Posted by daw nwe at 2:20 AM No comments:
စပါးရိုးပြတ်များနှင့် ဝင်းဝါနေသော လယ်ကွင်းပြင်ကြီး၏ နောက်တွင် အုံ့ဆိုင်းမှိုင်းပျနေသော တောင်တန်းကြီးများက ခန့်ထည်စွာ တည်လျှက်ရှိသည်။ ဆောင်းအကုန် နွေအကူး ညနေဆည်းဆာပီပီ လေရူးတွေနှင့်အတူ ရော်ရွက်ဝါတွေလည်း ဟိုတစသည်တစ ပျံဝဲလို့နေသည်။ ဒီလို နွေဦးရာသီမှာဆို ကျမငယ်စဉ်ကနေခဲ့ရသော ကျောင်းဝန်းကြီးထဲတွင် တမာတွေ လှိုင်လှိုင်ပွင့်ပြီး လေအဝှေ့ တမာရနံ့တွေသင်းပျံ့နေရောပေါ့။ ရင်ထဲတွင် တစစ်စစ်နာလာသည်။ “အဖေ”ဟု တိုးသက်စွာ ခေါ်မိသည်။
ကျမ ၆တန်းနှစ်တွင် မနက်စောစော ထင်းသွားခုတ်စဉ် ပိုးထိလို့ အဖေဆုံးခဲ့သည်များကို မြင်ယောင်လာသည်။ ထင်းရှားပါး သော ကျမတို့ဒေသသည် စပါးများရိတ်သိမ်းပြီးလျှင် လာမည့် တနှစ်စာအတွက် ထင်းပေါသော ရိုးမအစပ်တွင် ထင်းများ သွားခုတ်ရသည်။ အဖေနှင့်အစ်ကိုသည် ထင်းခုတ်သည့်နေရာသို့ နွားလှည်းများနှင့် သုံးလေးနာရီကြာသွားရသည်။ ကံဆိုး သောတနေ့တွင် ထင်းတောအရောက် လှည်းပေါ်ကဆင်းဆင်းချင်းမှာပဲ အဖေပိုးထိခံရသည်။ အိမ်ရောက်ရောက်ချင်း အမေနှင့်ကျမကို စကားတခွန်းမျှပင် မပြောနိုင်ဘဲ အဖေဆုံးပါးသွားခဲ့သည်။ ဆေးပေးခန်းရှိပေမဲ့ ဆေးမရှိသောကြောင့် ရွာတွင်အဆင်သင့်ရှိနေသော ကျန်းမာရေးမှူးးလည်း အဖေ့အား မည်သို့မျှ မကယ်နိုင်ခဲ့ပါ။ စာမတတ်သောအမေနှင့် အရွယ် မရောက်သေးသော ကျမတို့မောင်နှမဘဝတွေ မုန်တိုင်းထန်ခဲ့ရသည်။ ခိုင်းနွားနှစ်ကောင်ရှိသည့်အနက် တကောင်ရောင်း ပြီး အဖေ့အသုဘလှအောင် လုပ်ပေးခဲ့ရသည်။ ပညာတတ်ကြီးဖြစ်ချင်ခဲ့သော ကျမဘဝရဲ့ရောင်ခြည်တွေလည်း အဖေနဲ့ အတူ ငုပ်လျှိုးကွယ်ပျောက်ခဲ့ရသည်။
အသုဘမပို့မီ အဖေ့အား နောက်ဆုံးကန်တော့ရင်း “အဖေ”လို့ ခံစားချက်များ ရောထွေးစုစုံစွာ ခေါ်ဖြစ်သည်။ သားသမီး အပေါ်တွင် ဖခင်ပီသသောအဖေသည် အမေ့အတွက် ခင်ပွန်းကောင်းတယောက်တော့ မဟုတ်ခဲ့ပေ။ အဖေသည် “အိမ်ထောင်ဦးစီး၊ အိမ်ဦးနတ်”ဟုဆိုကာ အမေ့ကိုငြိမ်ဝပ်နေအောင် အုပ်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့ အတ္တသူရဲကောင်းတယောက် လည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဖေလယ်ထဲသွားအလုပ်လုပ်နေစဉ် အမေသည် အိမ်တွင် နွားချေးကြုံးကအစ၊ အဖေပြန်လာလျှင် ထမင်းပွဲရှေ့ရောက် လုပ်ကိုင်ပေးရသည်။ အမေသည် ကျမလူမှန်းသိတတ်စအရွယ်မှစ၍ နေထွက်မှနေဝင်အထိ အလုပ် များကို ဇယ်ဆက်သလို မနားတမ်းလုပ်နေရသည်ကိုပင် တွေ့နေရသည်။ ဒါတောင် အဖေပြန်လာလျှင် တံပိုးမှနွားများကို ဆီးကြိုဖြုတ်ပေးရသည်။ အဖေသည် စိတ်မထင်သလျှင် မထင်သလို အမေ့အား ငေါက်ငမ်းလေ့ရှိသည်။ ကျမမှတ်မိ သလောက် အဖေကအမေ့အား ချိုချိုသာသာဆက်ဆံသည်များကို မတွေ့ဖူးပါ။ အမေသည် သဘောကောင်းပြီး ပျော်ပျော် နေတတ်သူဖြစ်သည်။ အမေ၏ပြုံးရယ်မှုများကို အဖေ့ကွယ်ရာတွင်သာ တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ အဖေရှိသောအချိန်များတွင် အလုပ်များကို မနားမနေလုပ်ရင်း ဆူပူငေါက်ငမ်းခြင်း မခံရအောင်သာ သတိထား၍ လုပ်နေတတ်သည်။ အိမ်ထောင် တခုတွင် မိန်းမနှင့်ယောင်္ကျားတို့ လိုအပ်ချက်ကိုယ်စီနှင့် ဘဝကို ဖြည့်ဆီးပေါင်းဖက်တာချင်း တူညီကြသော်လည်း မိန်းမ ဖြစ်သောအမေက ဘာကြောင့် ဒီလိုနိုင်ထက်စီးနင်းပြုမူမှုများကို အမြဲခေါင်းငုံ့ခံနေရတာလဲလို့ ကျမ မကြာခဏ စဉ်းစား ဖူးသည်။ တချိန်တည်းတွင် အဖေ့အားလည်း မကျေနပ်ခဲ့။ ကျမကတော့ မဟုတ်မခံစိတ်ရှိသူပီပီ အဖေကအမေ့အား ဆူပူ ငေါက်ငမ်းလျှင် “အဖေက ဘာမှန်းလည်းမသိဘူး၊ အမေလည်း တချိန်လုံးအလုပ်တွေ မနားတမ်းလုပ်နေရတာ၊ ဆူဖို့ပဲ သိတယ်”ဟု တခါတရံပြန်အော်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်မျိုးတွင် သားသမီးအားလုံးထဲတွင် သမီးကိုသာအချစ်ဆုံးဟု ပြောလေ့ ရှိသော အဖေက ကျမအား ဒေါသမျက်လုံးများနှင့်သာ စိုက်ကြည့်လေ့ရှိသည်။ အမေက ကျမအား မသိမသာ ဆွဲဆိတ် သည်။ အဖေ့ကွယ်ရာတွင် အဖေ့ကိုပြန်ခံမပြောဖို့ ဆုံးမသည်။ ကျမကတော့ အမေပြောနေသည့်ကြားမှ “အမေက ဒီလိုအလျှော့ပေးလို့ အနိုင်ကျင့်နေတာ၊ မဟုတ်ရင် မခံနဲ့ပေါ့”လို့ ပြန်ပြောသည်။ “မလုပ်ပါနဲ့အေ၊ သူလုပ်ကျွေးလို့ ငါတို့ ထမင်းနပ်မှန်အောင် စားနေရတာ”ဟုလည်း ဆိုပြန်သည်။ ဒါပေမဲ့အမေ… အမေ့ရင်ထဲမှာ ဘာတွေရှိနေတယ်၊ အဖေဆူရင် ဘယ်လိုခံစားရတယ် ဆိုတာလောက်တော့ အမေတုံ့ပြန်မိဖို့ကောင်းပါတယ်လို့ ကျမက စောဒကတက်ဖြစ်အောင် တက် လိုက်သေးသည်။ ထိုစဉ်က အဖေ့ကိုမုန်းလို့မဟုတ်ပေမဲ့ အမေ့အားရိုက်နှက်ညှင်းဆဲခြင်းမပြုဘဲ အမေအားငယ်ပြီး သူရှိမှ ဖြစ်မယ်ထင်အောင် ဘယ်လိုတွေလုပ်ထားပါလိမ့်လို့ လူမမယ်အရွယ် ဦးနှောက်နှင့်မလိုက်အောင် နက်နက်နဲနဲ စဉ်းစား ခဲ့ဖူးသည်။ အမေက အဖေ့ကိုချစ်၍ လက်ထပ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ကျမအမေကြီး(အမေရဲ့အမေ) စိတ်ချမ်းသာအောင် လက်ထပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကျမအဒေါ်တွေပြောပြလို့သိရသည်။
အဖေနှင့်အမေ အဆင်မပြေဖြစ်ပြီဆိုလျှင် အဖေက အိမ်ပေါ်မှဝုန်းဒိုင်းကြဲပြီး ဆင်းသွားချိန် အမေ့မျက်နှာတွင် မျက်ရည် တွေနှင့်တွေ့ရတော့ ကျမဒေါသထွက်သည်။ အဖေကတော့ စိတ်ဆိုးပြီး ဆင်းသွား၊ ညနေဆိုလျှင် ရေချိန်ကိုက်ပြီး ပြန်လာ လေ့ရှိသည်။ ပြန်လာချိန်တွင်လည်း အမေ့အားနှုတ်ဖြင့် စိတ်ဆင်းရဲအောင် ထပ်မံနှိပ်စက်တတ်သည်။ အမေကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကြားမှာစိုးရိမ်သဖြင့် မည်သို့မျှတုံ့ပြန်မှု မပြုခဲ့ပေ။ ထိုသို့ ကျမမျက်စိရှေ့တွင် ကြိမ်ဖန်များစွာ တွေ့မြင်နေရင်း ကျမအရွယ်ရောက်လာသည်။ ကျမဦးနှောက်နှင့် စဉ်းစားတတ်သမျှနှင့်ပင် အမေ့အား ခွန်အားတွေကို မျှဝေနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်း ခဲ့သည်။ အနုနည်းနှင့်နှိပ်စက်တတ်သည့်အဖေ့အား ပေါင်းသင်းမနေဖို့၊ အမေ အဖေ့ကိုကွဲလိုက်ပါလားလို့၊ ကျမတို့မောင်နှမ အမေ့ကိုလုပ်ကျွေးမှာပေါ့လို့ လူငယ်စိတ်နှင့် စိတ်လိုက်မာန်ပါ ပြောဖြစ်သည်။ “တည်မိတဲ့ဘုရား ဠင်းတပဲနားနားတဲ့”။ ငါတို့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေရဲ့ဘဝက “တခုလပ်ဖြစ်တာနဲ့စာလျှင် မုဆိုးမဖြစ်ရတာက ပိုတင့်တယ်တယ်”လို့ တုန့်ပြန်တဲ့အမေ့ အား “ဘုရားရေ၊ အဲဒီစကားပုံတွေက အမေစိတ်ညစ်ရင် ဘာတွေများ မျှဝေခံစားပေးလို့လဲ”ဟု သနားကြင်နာစွာ မေးမိ သည်။ “ပတ်ဝန်းကျင်လည်း ရှိသေးတယ်သမီးရဲ့”ဟု တုန့်ပြန်သောအမေ့အား ကျမ ဘာမျှ စောဒကမတက်နိုင်ခဲ့ပေ။ အစ်ကိုက ယောင်္ကျားလေးပီပီ အိမ်တွင်းရေးဘာတွေဖြစ်နေသည်ကို မသိ။ အချိန်တန် အိမ်ပြန်လာ၊ သူငယ်ချင်းတွေနှင့် လျှောက်လည်၊ ဘာမျှ ပူပန်ပေးခြင်း၊ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲ နေသာသလိုနေသည်။ ဆယ်ကျော်သက်ကျမအတွက် “မိန်းမဆိုတာ မီးဖိုချောင်နိုင်ရတယ်”ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားအကြား ချောင်ပိတ်မိသူပီပီ တအိမ်လုံးရဲ့အပူတွေ အထူးသဖြင့် အမေ့၏ဘဝအမောများကြားတွင် မွန်းကြပ်စွာ ရှင်သန်ခဲ့ရသည်။
ကျမ ၆တန်းကျောင်းသူဘဝတွင် “တခုလတ်ဖြစ်ရတာနှင့်စာလျှင် မုဆိုးမဖြစ်ရတာက ပိုတင့်တယ်တယ်”ဆိုသောအမေ အမှန်တကယ်ပင် မုဆိုးမဖြစ်ခဲ့ရသည်။ အဖေမရှိလျှင် ထမင်းနပ်မှန်အောင်စားရမည်မထင်သော အမေက ဆွေမျိုးများ၏ ဝိုင်းဝန်းလှော်ခတ်မှုနှင့်အတူ မိသားစု၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန်ဟုဆိုကာ သူမထက်အနည်းငယ် ငယ်သော ဦးအောင်နှင့် နောက်အိမ်ထောင်ပြုလိုက်သည်။ အစ်ကိုက ပထွေးနှင့်အတူမနေလိုဟု အကြောင်းပြကာ အိမ်သိပ်မကပ် တော့ပေ။ အမေက အစ်ကို့အား အိမ်ကိုအချိန်မှန်ပြန်လာရန်နှင့် အမေ့ကွယ်ရာတွင် မိုက်မိုက်မဲမဲမနေဖို့ သောကများနှင့် တစာစာ ဆုံးမသည်။ ထိုသို့ အမေ့ထံတွင် သောကများနှင့်တွေ့ရပြန်တော့ ကျမရင်နာရသည်။ အရွယ်မရောက်သေးသော မောင်လေးက အဖေသစ်ရပြီဟုဆိုကာ ဝမ်းသာနေသည်။ အပျိုပေါက်ကျမအတွက် မရိုးသားတဲ့မျက်လုံးများနှင့် စိုက်ကြည့် တတ်သော ပထွေးအား မနှစ်မြို့မိ။ သူ့ထံမှ “သမီး”ဟု တစ်ခါခေါ်သံကြားတိုင်း ငရဲတစ်ခါကြီးရသည်။ ရိုးသားပြီး ယုန်သူငယ်လို ဖြူစင်သောအမေက သမီးနှင့်ခင်ပွန်းသစ်ကြားတွင် နားလည်မှုရစေချင်သည်။ ဒီအချိန်တွင် မိသားစုအတွက် အတ္တကြီးသည်ဟုဆိုနိုင်သော အဖေ့အား ပိုလို့တမ်းတမိသည်။ “သမီးမွေးကတည်းက နေလာတဲ့အိမ်ဟာ သမီးအတွက် လုံခြုံမှုမရှိတော့ဘူးလို့ ခံစားသိနဲ့သိလာရပြီအဖေ”လို့ တိုင်တည်မိသည်။
အဖေဆုံးပြီးနောက် ကျမကျောင်းထွက်လိုက်ရပြီး အမေနှင့်အတူ လယ်အလုပ်များဝိုင်းကူလုပ်ရသည်။ ကံကြမ္မာ၏ စေစားချက်အရ ရရိခဲ့သော ပထွေးနှင့်အတူ ဘဝကို လုံခြုံမှုမဲ့စွာ ဖြတ်သန်းရသည်။ ပထွေး၏မရိုးသားမှုများကို အမေ့အား ဖွင့်မပြောရက်ခဲ့။ အဖေ့လောက်သူ့အပေါ်တွင် စိတ်ဆင်းရဲအောင်မပြုမူသော နောက်အိမ်ထောင်ပြုခြင်းကို ကံကောင်းသည် ဟုယူဆထားသော အမေ့ယုံကြည်မှုကို မရိုက်ချိုးရက်ခဲ့ပေ။ အမေ့ကွယ်ရာတွင် မျက်လုံးများနှင့် ဖောက်ပြန်နေသော ပထွေးသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အတင့်ရဲလာပါသည်။ ကျမအား သမီးအရင်းလိုချစ်သည်ဟုဆိုကာ ဟိုပုတ် ဒီပုတ်နှင့် လက်ရဲဇက်ရဲနိုင်စွာ ဆက်ဆံတတ်သည်။ ကျမရည်းစားထားသည်ကို သိသွားသောအခါ အမြဲဆူပူသည်။ “အစ်မ သမီး၊ ကြည့်ဆုံးမအုံး၊ ကြည့်ပြောထားအုံး”ဟု အမေ့အား မကြာခဏ သွေးထိုးပေးသည်။ “ကျနော်က စေတနာနဲ့ပြောတာ” ဟုလည်း အဆစ်ပါသေးသည်။ အမေက ကျမ၏မဟုတ်မခံစိတ်ကို သိနေသော မိခင်ပီပီ ပထွေးရှေ့တွင် လိမ်လိမ်မာမာ နေဖို့ လေပြေလေးနှင့်ပြောသည်။ စိတ်ဆိုးလွန်းသဖြင့် အမေ့ရှေ့တွင် အံကိုတင်းတင်းကြိတ်ရင်း မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင် ကျခဲ့သည်။ သောကတွေနဲ့ပြည့်တင်းနေတဲ့ ဘဝအမောတွေ ဘယ်တော့မှ ပြေပျောက်နိုင်မှာလဲ။
တနေ့ ရွှေဝါရောင်စပါးခင်းထဲတွင် အမေ၊ ပထွေးနှင့် ကျမ စပါးအတူရိတ်သိမ်းနေကြသည်။ ကောင်းကင်ပြင်မှာတော့ ဆောင်းရာသီပီပီ မိုးတိမ်များကင်းစင်လို့နေသည်။ အပြာရောင်မိုးသားကောင်းကင်ကြီးအောက်ရှိ လယ်ကွင်းပြင်ထဲတွင် စာခြောက်ရုပ်များက လေအဝှေ့ ဟိုယိမ်းသည်ထိုးလို့နေကြသည်။ စာငှက်ကလေးများသည်လည်း တကျီကျီတေးသီရင်း စပါးနှံများကို ကိုက်ချီရန် စာခြောက်ရုပ်ကြီးအလစ်ကို ချောင်းမြောင်းလို့နေလေရဲ့။ လယ်ကန်သင်းရှိ စိမ်းမြနေတဲ့ ဇောင်ချန်းပင်မှာလည်း အခွံစိမ်းစိမ်း ပုပုလုံးလုံး ဇောင်းချန်းသီးတွေပြွတ်ခဲလို့နေသည်။ ဇောင်းချန်းချဉ်သိပ်ကြိုက်တဲ့ အဖေ့ကို သတိရမိသည်။ စပါးရိတ်နေရာမှ ကျောဆန့်ရင်း အဆုံးအစမရှိတဲ့ မိုးသားကောင်းကင်ပြာကြီးကို မော့ကြည့်ပြီး အဖေ့ကို လွမ်းဆွတ်လာသည်။ ဘာလိုလိုနဲ့ အဖေဆုံးတာ ၂နှစ်ကျော်လာခဲ့ပြီ။ ကျမပါးပြင်တွင် မျက်ရည်ပူများ စီးကျလာသည်။ ထိုအချိန်မှာပဲ ကျမခါးကိုပွေ့ဖက်တဲ့အထိအတွေ့ကို ရုတ္တရက်ခံစားလိုက်ရသည်။ လက်မှာတံစဉ်ကိုင်ထား ရင်း လှည့်ကြည့်လိုက်တော့…သူ … ဘုရား … ကျမမျက်လုံးများ ပြာဝေသွားသည်။ ဝန်းကျင်ကိုဝေ့ဝဲကြည့်ရင်း စပါး အတူရိတ်နေတဲ့ “အမေ” ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ။ “အမေ… ကျမကို ကယ်ပါအုံး”ဟု အော်တော့ “နင့်အမေ သောက်ရေသွားယူတယ်၊ နာရီဝက်တော့ အသာလေး”တဲ့။ ယုတ်မာလိုက်တဲ့ သူ။ သန်မာတဲ့လက်များနှင့် ကျမကို အတင်း အကြပ်ဖက်တွယ်ထားသည့်ကြားတွင် မလူးသာမလွန့်သာ ရှိလှသည်။ ကျမမျက်နှာနား နီးကပ်လာတဲ့ သူ့မျက်နှာကို တံတွေးနှင့်ထွေးပြီး တုန့်ပြန်မိခဲ့သည်။ နှစ်ယောက်သား စပါးရိုးပြတ်တွေပေါ်မှာ လုံးထွေးနေရင်းက ခွန်အားတွေ ယုတ်လျော့စပြုလာသည်။ အပြာရောင်မိုးသားကောင်းကင်ကြီးအောက်က အဖေကျင်လည်ရာ ဒီလယ်တောထဲမှာ ကျမဘဝ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျရတော့မှာလားဆိုတဲ့အသိက ရင်ကိုပြင်းစွာ နှိပ်စက်သည်။ စပါးရိုးပြတ်များကို အားကိုးတကြီး ဆုပ်ကိုင်နေစဉ် လက်မှလွတ်ကျသွားသော တံစဉ်ကိုပြန်စမ်းမိသည်။ ဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ဘဲ ရှိသမျှခွန်အားနှင့် တံစဉ်ကို အားကုန်ဝှေ့ယမ်းပစ်လိုက်သည်။ “အား”ဟူသော အော်သံနက်နှင့်အတူ သူ ကိုယ်ပေါ်မှ လွင့်စင်ကျသွားသည်။ ယောင်္ကျားခြေလှမ်းဖြင့် နှစ်နာရီလောက်လျှောက်မှရောက်သော ကျမ၏ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းရှိရာရွာသို့ ဘယ်ပုံ ရောက်သွားသည် မသိတော့။ ကျမအားလာရောက်တွေ့ဆုံကြသော အမေအပါအဝင် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ ကျမလက်ခံတွေ့ဆုံခြင်း မပြုဖြစ်ခဲ့ပေ။ ကျမအပေါ် ပထွေး၏မရိုးသားမှုများကို ဖွင့်ဟတိုင်ပင်ခဲ့ဖူးသော ချစ်သူ၏ သံသယ မေးခွန်းများကိုလည်း ရင်မဆိုင်လိုပေ။ အမေ၊ မောင်လေးနှင့်အစ်ကိုတို့အား နှုတ်မဆက်ပဲ သူငယ်ချင်းများ၏အကူအညီနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ထွက်လာခဲ့သည်။
ကျမဘဝတွင် အရွယ်ရောက်ယောင်္ကျား ၃ယောက်နှင့် တမိုးအောက်တွင် ဆုံဆည်းခွင့်ရခဲ့သည်။ တစ်ယောက်ကတော့ ကျမကို သိပ်ပြီးချစ်သည်ဆိုသော အဖေ။ တစ်ယောက်ကတော့ တအူတုံဆင်း အစ်ကို။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ကျမဘဝတွင် ရွေးချယ်ခွင့်မရလိုက်ပါဘဲ ဆွေမျိုးတော်စပ်ခဲ့ရသူ၊ တနည်းအားဖြင့် သူ့ဘဝအတွက် အမေ့ကို လိုအပ် လှပါသည်ဆိုသော ပထွေး။
ထိုယောင်္ကျားများသည် တမိုးတည်းအောက်တွင် အတူတကွနေထိုင်ရသော မိန်းမသားနှစ်ဦးကိုပင် တချိန်တည်းတွင် စိတ်ချမ်းသာအောင် စိုးစဉ်းမျှ မစွမ်းဆောင်ခဲ့။ မဟာယောင်္ကျားကြီးဝါဒ စွဲကိုင်သူ၊ အတွေ့အထိ၌ သာယာသူ၊ တကိုယ်ကောင်းဆန်သူများအဖြစ် လူ့လောကကို သူတလူငါတမင်း ကြီးစိုးချင်ကြသူများသာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ လူ့လောက ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထိုထိုသောယောင်္ကျားများကဲ့သို့ မိမိကိုယ်ကိုသာ ဦးစွာကြည့်တတ်သော၊ ချစ်တတ်သောယောင်္ကျားများ များစွာရှိနေမည်မှာ ယုံမှားသံသယဖြစ်ဖွယ် မရှိပေ။ အမေသည် ရရှိလာသော လူ့ဘဝကို တင်းတိမ်ရောင့်ရဲစွာဖြင့် ထိုယောင်္ကျားသားများ၏ ဘဝလိုအင်ဆန္ဒပြည့်ဝရေးအတွက် အဖြည့်ခံလူသားအဖြစ် ရှင်သန်ခဲ့ရသည်။ သောက်ရေခပ်ပြီး အပြန် အမေဆုံတွေ့ရသော ဒဏ်ရာရခင်ပွန်းနှင့် တဖက်တွင် ယခုအချိန်အထိ တွေ့ဆုံခွင့်မရခဲ့သော သမီးအကြား အမေ့ ဘဝကို ဘယ်လိုဆက်လျှောက်လှမ်းမလဲဆိုတာကိုတော့ သမီးသိချင်လှပါတယ်အမေ။
တမာရနံ့တွေကို လွမ်းသည်။ တမာရနံ့တွေအစား ဒီမှာရှူရှိုက်ရသည့် ကျမလိုအမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာ ဖိနှိပ်နေတဲ့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံ ရောပြွမ်းနေတဲ့ ကာဗွန်နံ့တွေကို ကြောက်ရွံ့လာသည်။ အမျိုးသမီးတွေအပေါ်တွင် နည်းမျိုးစုံနှင့် ခွဲခြားဖိနှပ်ခံရမှုများကို တွေ့မြင်နေရသည်။ ဒါတွေ ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတာလဲ။ ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေက လူ့လောက ဇာတ်ခုံမှာ အဖိနှိပ်အညှင်းဆဲခံတွေအဖြစ် ဘာကြောင့် ရှင်သန်နေကြရတာလဲ။ မလှပတဲ့ကံကြမ္မာကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကျမရဲ့အနာဂါတ်ကရော ဘယ်လိုလဲ။ ကျမသိပ်ချစ်ရတဲ့ အမေနဲ့ရော ဆုံဆည်းခွင့်ရှိနိုင်ပါ့မလား။ မျက်စိတဆုံးမြင်နေရတဲ့ အဆုံးအစမရှိ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းကြီးအောက်မှာ လောကဓံဆိုတဲ့ ဘဝမုန်တိုင်းတွေကြားမှာ မလှပတဲ့ကံကြမ္မာတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ဘဝကိုလျှောက်လှမ်းနေရတဲ့ အမေနှင့်ကျမလို အမျိုးသမီးတွေ ဘယ်လောက်များ များပြားနေပြီလဲ။ ။
၂၀၀၇ စက်တင်ဘာလထုတ် ချိုးလင်းပြာအမျိုးသမီးစာစောင် အတွဲ ၄၅၊ အမှတ် ၆ မှ
Posted by သော်နွယ် at 8:50 AM No comments:
ကျောင်းသားတပ်မတော်ရဲ့ ၂၀၁၀ မှတ်စုများ